မဖြစ်မနေပြုမူသောအပြုအမူများတွင် Kappa Opioid နှင့် Dopamine စနစ်များအကြားအပြန်အလှန်ဖြတ်ခြင်း (၂၀၂၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn On
မဖြစ်မနေအပြုအမူများတွင် Kappa Opioid နှင့် Dopamine စနစ်များအကြားတွင်လမ်းလျှောက်ခြင်း (၂၀၂၀)
ရှေ့။ Pharmacol, 18 ဖေဖော်ဝါရီ 2020 | ။ https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00057
Angélica del Pilar Escobar1, ဟိုဆေး Patricio Casanova2,3, María Estela Andrés4 နှင့် ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Fuentealba၅ *
1Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, သိပ္ပံဌာန, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, ချီလီ
2ဌာနမှ Neurociencia၊ Facultad de Medicina၊ ချီလီတက္ကသိုလ်၊ Santiago, ချီလီ
3Núcleo Milenio NUMIND Neuropsychiatric Disorders ၏ဇီဝဗေဒ, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, ချီလီ
4ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးဇီဝဗေဒဌာန၊ ဇီဝသိပ္ပံဌာန၊ Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, ချီလီ
5ဓာတုဗေဒဌာန၊ Pontificia Universidad Católica de Chile၊ Santiago, ချီလီဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံဌာနခွဲ၊ ဌာန။
ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သောအပြုအမူများ၏အားကို midbrain dopamine neuron များကထိန်းချုပ်သည်။ dopaminergic ဆားကစ်၏လည်ပတ်မှုအားမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်စွဲစွဲလမ်းမှုမလိုက်နာခြင်းရောဂါတို့တွင်တွေ့ရှိရသည်။ compulsive behavior သည် dopamine neurotransmission နှင့်မြင့်မားသောဆက်စပ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုပြသသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်အာရုံခံဆဲလ်များ၏ပစ်ခတ်မှုကိုလျှော့ချသည့် D2 receptors (D2R) မှတစ်ဆင့် dopamine ၏ homeostatic လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ထိန်းချုပ်သည်။ Dopamine ကူးစက်မှုကို kappa opioid system ကဲ့သို့သော heterologous neurotransmitter system များမှထိန်းချုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ kappa opioid စနစ်နှင့် dopamine ထုတ်လွှင့်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိဗဟုသုတများစွာသည် ဦး နှောက်ရောဂါများမတိုင်ခင်ကတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ဦး နှောက်ထဲရှိ microdialysis ကို အသုံးပြု၍ Kappa Opioid Receptors (KOR) ၏ပြင်းထန်သော activation သည် striatum ရှိ dopamine ပမာဏကိုလျော့နည်းစေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ KOR ၏ဤတားစီးမှုသက်ရောက်မှုသည် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး၏သက်ရောက်နိုင်မှုကိုဆန့်ကျင်သောကြောင့် KOR agonists ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာကုထုံးအဖြစ်အသုံးပြုရန်အဆိုပြုထားသည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကအနှစ် ၃၀ ကြာပြီးနောက်မှာ KOR ရဲ့ရန်သူတွေကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုကုသဖို့အဆိုပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြီးအကျယ်ပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ဒီနှစ်တွေအတွင်းဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ။ စုဆောင်းရရှိသောအထောက်အထားများအရ KOR ၏ synaptic dopamine အဆင့်များအပေါ်သက်ရောက်မှုသည် KOR ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့် dopamine အာရုံခံဆဲလ်များသို့ဝင်လာသောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်နှင့်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုများပေါ် မူတည်၍ ရှုပ်ထွေးကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်၎င်း၏ပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုမှ, နာတာရှည် KOR activation dopamine neurotransmission နှင့် dopamine-mediated အပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့ပုံရသည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့စဉ်ကန ဦး ဆန့်ကျင်။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်မှာပြင်းထန်သောနှင့်ဆန့်ကျင်သော KOR သက်ရောက်မှုများကြောင့်ဆန့်ကျင်သောလုပ်ရပ်များဖြစ်သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ D1988R ၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော compulsive အပြုအမူများသည် dopamine နှင့် sensitized D30R တို့၏လျော့နည်းသွားသော synaptic အဆင့်များနှင့်ဆက်နွယ်သော KOR ၏စဉ်ဆက်မပြတ် Co-activation ကြောင့်အလားအလာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ကာလအရ KOR ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းသည်လှုံ့ဆော်သောအပြုအမူများညှိခြင်းကိုထိခိုက်သော dopamine အဆင့်များအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည် kappa opioid system ၏ထည့် ၀ င်မှုများကို compulsive အပြုအမူများ၏ dopaminergic ဆက်နွယ်မှုများသို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
compulsive အပြုအမူအတွက် dopaminergic စနစ်
အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခြင်းသည်ဆိုးကျိုးများရှိစေကာမူသိသာသောရလဒ်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်မိမိဘာသာရပ်တန့်ရန်မဖြစ်နိုင်Robbins et al ။ , 2012) ။ compulsive အပြုအမူသည်အခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများတွင်စွဲမက်စွဲမက်စေတတ်သည့်ရောဂါ (OCD) နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏အမာခံများဖြစ်သည်။ အပြုအမူကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မတုန်မလှုပ်စေသည့်ရောင်စဉ်ပြdisနာများအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။Williams က et al ။ , 2013) ။ ကျယ်ပြန့်သောပုံမှန်အပြုအမူများ (ဥပမာ - စစ်ဆေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ လက်ဆေးခြင်းစသည်ဖြင့်) သည် OCD လူနာများအတွက်မဖြစ်မနေဖြစ်လာနိုင်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်သောကရောက်စေသည့်အတွေးများကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အလားတူစွာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမူးယစ်ဆေးစွဲနေသူများထံမှမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသည် OCD ကဲ့သို့ပင်အတွေ့အကြုံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားလုပ်သူများအားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆုလာဘ်နှင့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုတွင်တူညီသောချို့ယွင်းချက်များကိုအခြေအနေနှစ်ခုလုံးတွင်တွေ့ရှိရသည် (Figee et al ။ , 2016အချို့သောစာရေးဆရာများအား OCD အားအကျင့်စရိုက်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုအဖြစ်ဆွေးနွေးရန် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။Holden, 2001).
compulsive အပြုအမူမှ ဦး ဆောင်ဖြစ်နိုင်သောတစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်ခြေယန္တရားမူးယစ်ဆေးတစ်ခု amplified လှုံ့ဆျောမှု ("လို") တစ်ခုတိုးမြှင့်ပျြောမှေ့စ ("နှစ်သက်") အကျိုးသက်ရောက်မှုဖွံ့ဖြိုးခြင်းမရှိဘဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကြောင့်ဖြစ်သောစွဲ၏မက်လုံးပေး - sensitization သီအိုရီအတွင်းရှုမြင်သုံးသပ်သည်Berridge et al ။ , 1989; Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2016) ။ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု / လှုံ့ဆော်မှုတိုက်ဖျက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မက်လုံးပေးသည့်အပြုသဘောဆောင်သောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါဆု / လှုံ့ဆျောမှုဆားကစ်၏ midbrain dopamine အာရုံခံ၏ရေးစပ်သည် substantia nigra အသီးသီး striatum ၏ dorsal နှင့် ventral အလွှာပစ်မှတ်ထားသော ventral tegmental (ရိယာ (VTA) ။ dtral striatum သို့ပရိုဂျက်ပြုသည့် dopamine neuron များသည်အလေ့အထများကိုရယူခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်း ventral striatum သို့မဟုတ် nucleus accumbens (NAc) သို့ပရိုဂျက်ပြုသည့် Dopamine neuron များသည်အစဉ်အလာအားဖြင့်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်အပြုအမူများနှင့်ဆက်နွယ်သည်။Everitt နှင့် Robbins, 2005; ပညာရှိ 2009; Yager et al ။ , 2015; Volkow et al ။ , 2017).
အလားအလာစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးသတ်မှတ်ဆေးထိုး၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုကသွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးအဖြစ် (ဆု / လှုံ့ဆျောမှု circuit ကို၏အသိအမြင်ကြွက်များတွင်လေ့လာသည်ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997; Robinson နဲ့ Berridge, 2001) ။ Locomotor sensitization သည်ကြာရှည်ခံနိုင်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ရက်သတ္တပတ်များ၊ လများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြတ်တောက်ပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။Robinson နဲ့ Berridge, 1993) ။ ဆု / လှုံ့ဆော်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနယ်ပယ်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းကမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်ဟုအစောပိုင်းကအကြံပြုခဲ့သည်။Robinson နဲ့ Berridge, 1993) ။ ထို့ကြောင့်, locomotor sensitization ပြန်လည်အုပ်ချုပ်ရေးရှာကြံ Self- အုပ်ချုပ်မှုကိုကင်းလွယ်ကူချောမွေ့de Vries et al ။ , 2002) ။ ထို့အပြင်ကိုကာကိုင်းအားကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးချဲ့ထားသည့်ကြွက်များသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရရှိသောကြွက်များထက်ကိုကင်းကို locomotor တုန့်ပြန်မှုကိုပိုမိုပြသသည် (Ferrario et al ။ , 2005) ။ ထို့အပြင် psychostimulants မှ locomotor sensitization အခြေခံ neurochemical အပြောင်းအလဲများကိုလည်း compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေရေးမှာလေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည် (Steketee နှင့် Kalivas, 2011; Giuliano et al ။ , 2019) ။ ဤအချက်အလက်များသည်ရွေ့လျားမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းနှင့်လူသားတို့တွင်တွေ့ရသောမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းများအကြားအစောပိုင်းအဆိုပြုထားသောစာပေးစာယူကိုထောက်ခံသည် (Robinson နဲ့ Berridge, 1993; Vanderschuren နှင့် Kalivas, 2000) ။ နည်းစနစ်အရအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုခြင်းသည် dopaminergic neurotransmission ကိုတိုးပွားစေသည့် mesolimbic dopamine ဆားကစ်များကိုထိခိုက်စေသည်။ Psychostimulants သည်ကိုကင်းသို့မဟုတ်အမ်ဖီတမင်းများကဲ့သို့သောပလာစမာအမြှေးပါး dopamine Transporter (DAT) ကိုပိတ်ဆို့သော striatum နှင့် NAc ရှိ synaptic အာကာသအတွင်း dopamine ပမာဏများပြားစေခြင်းဖြင့် locomotion ကိုသက်ဝင်စေသည်။Steketee နှင့် Kalivas, 2011) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲသည်နှင့်အမျှ dopamine ဆုလာဘ် / လှုံ့ဆော်မှုတိုက်ဖျက်ရေး circuit ကို sensitization သည် OCD တွင်တွေ့ရသောအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အမှန်မှာ၊ dopamine D2 receptors (D2Rs) ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းသည်ကြွက်များနှင့်ကြွက်များအတွင်းရှိ locomotor sensitization နှင့်အပြုအမူများကိုစစ်ဆေးရန်လုံလောက်သည်။Szechtman et al ။ , 1998; Szechtman et al ။ , 1999; နေရောင် et al ။ , 2019) ။ Serotonin ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှင့်အတူနာတာရှည်ကုသမှုပြီးနောက် compulsive အပြုအမူများလျော့နည်းခြင်းအားဖြင့်တွေ့မြင်အဖြစ်, compulsive စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးအပြုအမူတစ်ခုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှု၏ထပ်ခါတလဲလဲ quinpirole, တစ် ဦး D2R / D3R agonist ၏အုပ်ချုပ်မှု, OCD ၏လက်ခံခဲ့သည်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါသည်, တရားဝင်မှုမျက်နှာကိုတရားဝင်မှု recapitulates အဖြစ် inhibitors (SRI) နှင့်ဤပုံစံတွင်ပါဝင်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုရောဂါဗေဒရှိသူများနှင့်မျှဝေခြင်းသည်တရားဝင်မှုကိုတည်ဆောက်သည်။Stuchlik et al ။ , 2016; Szechtman et al ။ , 2017). အချုပ်အားဖြင့်၊ dopamine ဂီယာကိုထပ်ခါတလဲလဲသက်ဝင်စေခြင်းအားဖြင့်၊ pre-synaptic (dopamine release) သို့မဟုတ် post-synaptic (D2R ၏ activation) ယန္တရားများသည် locomotor sensitization နှင့် compulsive အပြုအမူများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
kappa opioid စနစ်သည်ဆုချီးမြှင့်ခြင်း / လှုံ့ဆော်မှုအတွက် dopamine ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်သောအသာလွန်ဆုံးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သက်သေအထောက်အထားများအရ kappa-opioid ဂီယာသည် dopamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆန့်ကျင်သည်။ kappa opioid receptors (KORs) ၏စူးရှသော activation သည် psychostimulants မှဖြစ်ပေါ်သော locomotor လုပ်ဆောင်မှုကိုတန်ပြန်သည်။ (မီးခိုးရောင် et al ။ , 1999) ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲ KOR ကိုစတင်ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းသည်။Koob, 2013) ။ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော dysphoria ၏အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် homeostatic kappa opioid ကူးစက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။Koob, 2013) အတင်းအကျပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (Chavkin နှင့် Koob, 2016) ။ တကယ်တော့ KOR ၏ပိတ်ဆို့မှုကစိတ်ဖိစီးမှုကိုကာကွယ်ပေးပြီးနီကိုတင်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးခြင်းကိုတားဆီးခဲ့သည်။မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် et al ။ , 2013), ကိုကင်း (Beardsley et al ။ , 2005) နှင့်အီသနော (Sperling et al ။ , 2010) ။ ဤတွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ, KOR ပိတ်ဆို့မှုသည်မူးယစ်ဆေးအပေါ်၎င်းတို့၏တိုးမြှင့်သော locomotor တုန့်ပြန်မှုကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ amphetamine sensitized ကြွက်များ၏ dorsolateral striatum တွင် dopaminergic ပြောင်းလဲမှုများကိုပြန်လည်ရယူသည် (Azocar et al ။ , 2019). ထို့ကြောင့် KOR စနစ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းအားဖြင့်အားဖြည့်ပေးမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ OCD တွင်အပျက်သဘောဆောင်သောအားဖြည့်ခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းအနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအားဖြည့်ခြင်းသည် quinpirole sensitization တွင်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အမှန်မှာ D2R သည်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ခြင်းမျိုးဆက်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် D2R ၏ရှည်လျားသော isoforma မရှိသောကြွက်များတွင် morphine- ဆုတ်ခွာနိုင်သည့်နေရာမှနေရာဖယ်ရှားခြင်းကိုမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။Smith က et al ။ , 2002) နှင့် abstinence ကာလအတွင်းထပ်ခါတလဲလဲ quinpirole ကုသမှုတစ်ခုအလိုအလျောက်အုပ်ချုပ်ရေးပါရာဒိုင်းအတွက်ရှာဖွေနေကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူ quinpirole မှ sensitized ရွေ့လျားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု ()de Vries et al ။ , 2002), psychostimulant နှင့် quinpirole- သွေးဆောင် sensitization အကြား shared ယန္တရားများအကြံပြုခြင်း။ ထို့အပြင်ပွင့်လင်းမြင်သာသောနယ်ပယ်တွင်အိမ်လှောင်အိမ်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲလှောင်အိမ်ထဲသို့ရောက်ရှိခြင်းသည် locomotor sensitization နှင့် compulsive checking behavior ကိုလျော့နည်းစေသည်။Szechtman et al ။ , 2001ဘေးကင်းလုံခြုံမှု / အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်အချက်များသည်အထိခိုက်မခံနိုင်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းညွှန်ပြခြင်း။ psychostimulant- သွေးဆောင် sensitization အလားတူပင် KOR ၏ထပ်ခါတလဲလဲ activation locomotor sensitization လွယ်ကူချောမွေ့Escobar et al ။ , 2017) နှင့်မသင်မနေရစစ်ဆေးနေအပြုအမူ (Perreault et al ။ , 2007) quinpirole ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်သွေးဆောင်။ ဤစွမ်းအားသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိကိုပိုမိုဆိုးရွားသည့်အားဖြည့်အားဖြည့်မှု၏အကျိုးဆက်ဖြစ်မလားကိုဖော်ထုတ်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောစေ့စေ့စပ်စပ်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုအရ kopa-opioid system ၏ dopaminergic transmission အပေါ်ရှုပ်ထွေးကြောင်းဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် dopamine လမ်းကြောင်းပေါ်မူတည်သည်။Margolis et al ။ , 2006; Margolis et al ။ , 2008), နှင့် KOR အဲဒီ receptor ၏ activation နှင့် dopamine အဲဒီ receptor ၏ activation အကြားအချိန်ကိုက်အပေါ် (Chartoff et al ။ , 2016) ။ ဒီရှုပ်ထွေးမှုနှင့်အညီ, KOR ligands ၏အလားအလာကုထုံးအသုံးပြုမှုကိုကျယ်ပြန့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ KOR agonist မူးယစ်ဆေးဝါးသွေးဆောင် hyperdopaminergia (attenuating) မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲအဆင့်အတွင်းဆေးခန်းအသုံးဝင်သောဖြစ်အံ့သောငှါအဆိုပြုထားခဲ့သည်Shippenberg et al ။ , 2007) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, KOR ရန်ကထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီးနောက် dynorphin စကားရပ်၏တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာ Syndrome ကုသရာတွင်အသုံးဝင်ပေမည် (Wee နှင့် Koob, 2010) ။ ထို့ကြောင့် KOR တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist အဆိုပြုထားခဲ့သည် (Béguin et al ။ , 2012) စွဲစွဲသူများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုကုသရန်ကုထုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် (Chartoff et al ။ , 2016; Callaghan et al ။ , 2018) ။ ဒီပြန်လည်သုံးသပ်မှာတော့ကျနော်တို့အပြုအမူ sensitization နှင့် compulsion ၏ dopaminergic ဆက်စပ်မှု၏အချိန် / အခြေအနေ - မှီခိုမော်ဂျူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
Striatal နှင့် Midbrain ဒေသများရှိ Kappa Opioid နှင့် Dopaminergic Systems များအကြားခန္ဓာဗေဒနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာခြေလှမ်း
KORs များသည် midbrain dopamine system တွင်အလွန်အမင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားသော Gi / o ပရိုတင်းပါဝင်သော receptors များဖြစ်သည် (Mansour et al ။ , 1996) ။ ဤရွေ့ကား receptors mu (MOR), မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (DOR) နှင့် kappa (KORs) ကရေးစပ် opioid receptors ၏မိသားစုမှပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤအ receptors များအတွက် endogenous agonists အသီးသီး endorphins, enkephalin နှင့် dynorphin ဖြစ်ကြသည်။ striatum တွင်၊ dynorphin ကိုနျူကလိယကနေ KORs ကိုသက်ဝင်ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ပေါ်သော axon များရှိ dopamine D1receptor (D1R) - အလယ်အလတ်အာရုံခံများ (MSNs) ကဖန်တီးသည်။Mansour et al ။ , 1995) ။ ကြွက် NAc ၏အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ကြည့်သောရုပ်ပုံများအရ KORs သည် DAT ပါဝင်သောကြိုတင်ငုပ်ကိရိယာများတွင်အဓိကတွေ့ရပြီး KORs ၏အနည်းငယ်သောအချိုးအစားသည် DAT အပေါ်မှီခိုနေသည့် dendrites များပေါ်တွင်မူတည်သည် (Svingos et al ။ , 2001; Kivell et al ။ , 2014) ။ NAc ထံမှ presynaptic-synaptosomal ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများသွင်ပြင်လက္ခဏာများ Immunofluorescent လေ့လာမှုများ KORs နှင့် D2Rs ဦး စားပေး dopamine synthetizing အင်ဇိုင်း, tyrosine hydroxylase (TH) ပါဝင်သော synaptosomes အတူတကွကြောင်းပြသEscobar et al ။ , 2017) ။ ထို့အပြင် KORs သည် NAc နှင့် striatum ၏ဆဲလ်အလွှာများ၌များပြားပြီးဆဲလ်လူအများအပြားရှိ D2Rs နှင့်အတူ colocalize (Escobar et al ။ , 2017) ။ မျိုးရိုးဗီဇနှင့်မော်လီကျူးထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အတူက striatum တွင်စုစုပေါင်း KOR ၏ ၂၀% ကို DA ဆိပ်ကမ်းများတွင်တွေ့ရှိသည်ဟုအကြံပြုထားသည် (Van't Veer et al ။ , 2013) ။ ထိုမှတပါး, Tejeda et al ။ (၂၀၁၇) D1R နှင့် D2R MSNs နှစ်ခုလုံးသည် MSNs ပါ ၀ င်သည့် D1R အတွက်ပိုမိုမြင့်မားသော ဦး စားပေး KOR ကိုဖော်ပြသည် (Tejeda et al ။ , 2017) ။ ဤခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များအရ KORs သည် dopamine neurotransmission ကိုထိန်းချူပ်ခြင်း၊ ဆုချခြင်း / လှုံ့ဆော်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုထိန်းညှိပေးသည်။
အများအပြားကစမ်းသပ်ချဉ်းကပ်မှု KORs ၏ activation dopamine ထုတ်လွှတ်တားစီးကြောင်းပြသပါင။ KORs ကိုစနစ်တကျထိုးသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဒေသတွင်း agonists များပြန့်ပွားခြင်းအားဖြင့် KORs ကိုစူးရှစေခြင်းက NAc ရှိ dopamine ၏ extracellular level ကိုလျော့နည်းစေသည် (di Chiara နှင့် Imperato, 1988; Spanagel et al ။ , 1992; Fuentealba et al ။ , 2006) နှင့် dorsal striatum (Gehrke et al ။ , 2008) ။ dopamine neurotransmission အပေါ် KORs ၏ tonic inhibitory action ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ရေရှည်နှင့်ရွေးချယ်နိုင်သော KOR ရန်သူမဟုတ်သော -binaltorphimine (nor-BNI) ၏တိုက်ရိုက်ပြုတ်ရည်ကိုထောက်ပံ့ခြင်း (Broadbear et al ။ , 1994) NAc တွင် Basin dopamine ပမာဏတိုးပွားစေသည် (Spanagel et al ။ , 1992) နှင့် dorsal striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန် (Azocar et al ။ , 2019) ။ dopamine ကို KOR tonic တားစီးမှု၏နောက်ဆုံးသက်သေကို KOR နောက်ကောက်ကြွက်များတွင်ပြသည်။ ၎င်းသည် striatum နှင့် NAc ရှိ extracellular level ကိုဖော်ပြသည်။Chefer et al ။ , 2005) ။ dopamine ထုတ်လွှတ်မှု၏ KOR တားစီးမှုအတွက်တာ ၀ န်ရှိသောယန္တရားများကိုရှင်းလင်းစွာမသိရှိရသေးပါ။ သို့သျောလညျးကကောင်းစွာ KORs ၏ activation အရှင် vesicular neurotransmitter လွှတ်ပေးရန်၏ဆဲလ် hyperpolarization နှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းသွေးဆောင် K + ၏တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် Ca2 + စီးကူး၏ကျဆင်းခြင်းကို ဦး ဆောင်ကြောင်းလူသိများသည်Bruchas နှင့် Chavkin, 2010; Margolis နှင့် Karkhanis, 2019).
ထို့အပြင်အတွက်စသည်တို့ နှင့် Vivo အတွက် အလုပ်လုပ်တဲ့ဒေတာ KORs DAT ၏လှုပ်ရှားမှု modulating အားဖြင့် dopamine extracellular အဆင့်ဆင့်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ KORs နှင့် DAT ပူးတွဲဖော်ပြသော EM4 ဆဲလ်များတွင် KORs ၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည် voltammetry ဖြင့်တိုင်းတာသော dopamine ပမာဏကိုမြင့်တက်စေသည်။Kivell et al ။ , 2014) ။ An ဟောင်း Vivo ခွဲခြားထားသည့်တစ်ရှူးများတွင် voltammetry ကိုသုံးခြင်းဖြင့်လည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းက KOR agonist U-69593 ကိုစနစ်တကျထိုးသွင်းခြင်းသည် NAc တွင် dopamine စားသုံးမှုကိုမြင့်တက်စေခဲ့သည် (Thompson က et al ။ , 2000) ။ အလားတူမကြာသေးမီကဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ nor-BNI သည် ventral နှင့် dorsal striatum တွင် dopamine စားသုံးမှုတိုးခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး MP1104 ကိုရောနှောထားသော Kappa / Delta opioid receptor agonist (စသည်တို့) ကိုစနစ်တကျထိုးသွင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။Atigari et al ။ , 2019) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, dopamine စားသုံးမှုအပေါ် KOR ၏သက်ရောက်မှုသေးအပြည့်အဝဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ KOR တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist nalmefene ၏စနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်မှုသည် striatal dopamine စားသုံးမှုပမာဏအားမှီခို။ အစာရှောင်ခြင်း scan cyclic voltammetry (FSCV) မှတွက်ချက်သည် (နှင်းဆီ et al ။ , 2016) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင် non-net flux microdialysis ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ KOR ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းက dopamine စားသုံးမှုကိုသွယ်ဝိုက်တိုင်းတာသောထုတ်ယူမှုအပိုင်း (Ed) တိုးလာခြင်းနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည်။Chefer et al ။ , 2006; Azocar et al ။ , 2019), KOR ၏လုပ်သူများ activation DAT လှုပ်ရှားမှု (dopamine စုပ်ယူ) တခုတခုအပေါ်မှာ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုကြောင်းအကြံပြုသည်။ ဤရလဒ်သည် dopamine extracellular level ကိုထိန်းချုပ်ရန် dopamine စားသုံးမှုအပေါ် endogenous KOR လုပ်ဆောင်မှု၏ရှုပ်ထွေးသောအခန်းကဏ္highlightကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ FSCV ကဲ့သို့သောပိုမိုမြင့်မားသောယာယီဖြေရှင်းမှုချဉ်းကပ်မှုများသည် dopamine စားသုံးမှုအပေါ် KOR ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည် (Ebner et al ။ , 2010; Ehrich et al ။ , 2015; ဟော့ဖ်မန်း et al ။ , 2016striatal ဒေသများရှိ DAT လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည် Kub-periodic period လိုအပ်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ KOR-mediated DAT လုပ်ဆောင်မှုကို KOR activation မှဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဆဲလ်အမြှေးပါးများပေါ်ရှိ DAT အရေအတွက်တိုးပွားလာခြင်းအားဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်မှာ striatal synaptosomes နှင့် cell တွင် လိုင်းများKivell et al, 2014).
ကြွက် midbrain တွင်ဖျော်ဖြေသော Autoradiographic assay သည် KORs နှင့် SN နှင့် VTA တို့၏ rostrocaudal ဝင်ရိုးတွင်သိသိသာသာစည်းနှောင်ကြောင်းပြသည်။Speciale et al ။ , 1993) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အီလက်ထရွန် microscopy ဒေတာက dynorphin ပါဝင်သောဆိပ်ကမ်း SN နှင့် VTA အတွက် TH အပြုသဘော dendrites အပေါ်တိုက်ရိုက် synapse ကြောင်းပြသ (Sesack နှင့် Pickel, 1992), KORs dopamine အာရုံခံ၏ somatodendritic အခန်းများတွင်ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောကြောင်းအကြံပြု။ Striatal D1R ပါ ၀ င်သည့် MSNs များသည် midopain dopamine neuron များသို့ dynorphin သွင်းအားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, KORs ၏ပိတ်ဆို့မှုဒီတားစီး GABA ကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းညွှန်း, VTA dopamine အာရုံခံမှ D1R-MSNs ၏ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြုပြင်မထားဘူးEdwards က et al, 2017) ။ KORs dopamine midbrain အာရုံခံ၏ somatodendritic တုံ့ပြန်မှု modulate ။ Electrophysiological လေ့လာမှုများအရ VTA တွင် KORs သည် activation ဖြစ်ခြင်းနှင့် dopamine neuron များ၏ spontaneus ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုလျော့ကျစေသည်Margolis et al ။ , 2003) ။ အကျိုးဆက်အ KOR agonists ၏ပြုတ်ရည် somatodendritic dopamine efflux လျော့နည်းစေသည်Smith က et al ။ , 1992; Dalman နှင့် O'Malley, 1999) ။ သို့သော် KORs ၏တားစီးနိုင်မှုက dopamine အာရုံခံအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ VTA ရှိ kappa-opioid agonists ၏ပြုတ်ရည်က medial prefrontal cortex (mPFC) တွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။Margolis et al ။ , 2006) ဒါပေမယ့်မဟုတ် NAc အတွက် (Devine et al ။ , 1993; Margolis et al, 2006) ။ ထိုမှတပါး, Margolis et al ။ (၂၀၀၆) KORs သည် mPFC နှင့် basolateral amygdala သို့ VTA dopamine အာရုံခံဆဲလ်များကိုဟန့်တားပေးသည်။ ထိုနှစ်၌ပင်, Ford et al ။ (၂၀၀၆) MOR VTA အချပ်များတွင် KOR ၏ agonists များရေချိုးခြင်းသည် NAc နှင့်သက်ဆိုင်သော dopamine အာရုံခံဆဲလ်များကိုပိုမိုမြင့်မားသောအပြင်ဘက်သို့စီးဆင်းစေကြောင်းဖော်ပြသည် basolateral amygdala နှင့်ပတ်သက်သောပရောဂျက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက KORs သည် NAc သို့ပရောဂျက်ပြုလုပ်သော dopamine အာရုံခံဆဲလ်များကိုပိုမိုတားဆီးပေးကြောင်းဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ amygdala ရန်။ ထို့အပွငျ KOR ၏ activation excitatory ၏လွှဲခွင်ကိုလျော့နည်းစေသည် (Margolis et al ။ , 2005) နှင့် inhibitory (Ford ကား et al ။ , 2007midbrain dopamine အာရုံခံသို့ postsynaptic ရေစီးကြောင်း။ မျိုးစိတ်များနှင့် VTA ၏ရှုပ်ထွေးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုစီမံကိန်းများနှင့် mPFC နှင့် NAc တို့၏ခြားနားချက်များ (ဗန် Bockstaele နှင့် Pickel, 1995; Carr ကနှင့် Sesack, 2000) KORs ရွေးချယ် VTA အတွက်အာရုံခံ dopamine လူ ဦး ရေအချို့တားစီးခြင်းရှိမရှိတည်ထောင်ရန်ကစိန်ခေါ်မှုပါစေ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူဤနေရာတွင်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များအရ KORs များသည် Sopa နှင့် dopamine neuron ၏ဆိပ်ကမ်းများအပြင်၎င်းတို့ကိုထိန်းညှိပေးသည့်သွင်းအားစုများဖြစ်သည်။
Psychostimulants-induced sensitization and compulsive အပြုအမူများတွင် Dopamine Neurotransmission ကိုထိန်းချုပ်သော KORs ၏အခန်းကဏ္ole
မူးယစ်ဆေးစွဲသည်၎င်းတို့၏အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်သက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်သောကန ဦး ထကြွလွယ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းပါ ၀ င်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် observable တစ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုဖြစ်ပါတယ်။ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက် (dopaminergic လမ်းကြောင်းများရှိ neuroadaptations) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုနှင့်စားသုံးမှုအတွက်တာဝန်ယူရန်အဆိုပြုထားသည် (Everitt နှင့် Robbins, 2005; Koob နှင့် Volkow, 2016) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုမောင်းနှင်ရန်အဆိုပြုထားသောယူဆချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ၄ င်း၏အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသိရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည် (Koob, 2013) ။ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ် kappa opioid စနစ်၏တားစီးထိန်းချုပ်မှုသည်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပျက်သဘောဆောင်သောဂုဏ်သတ္တိများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ သို့သော် dopamine neurotransmission နှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ် KOR ၏သက်ရောက်မှုများသည်ရှုပ်ထွေးပြီးဆန့်ကျင်ပုံရသည်။ အမှန်မှာ၊ amphetamine နှင့်ကိုကင်းတို့က dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကို KOR agonists ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကလျော့နည်းစေသည်။Heidbreder နှင့် Shippenberg, 1994; Maisonneuve et al ။ , 1994; Thompson က et al ။ , 2000) နှင့်ကိုကင်းကိုယ်တိုင် Self- အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းသွား (Negus et al ။ , 1997) ။ psychostimulants ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်သကဲ့သို့ထို့အပြင် KORs, post-synaptic D1R ၏စဉ်ဆက်မပြတ် activation ကိုတုံ့ပြန် mesolimbic လမ်းကြောင်း၏ dopamine လွှတ်ပေးရန်အပေါ်တစ် ဦး inhibitory တုံ့ပြန်ချက်ကွိုးစားအားထု (ကိုးလ် et al ။ , 1995; Nestler, 2001) ။ ဝိရောဓိအားဖြင့်, KORs ၏ activation လည်းဆု / လှုံ့ဆျောမှုလမ်းကြောင်းအတွက် dopamine ထုတ်လွှတ်လွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ပါတယ်Fuentealba et al ။ , 2006; Fuentealba et al ။ , 2007) နှင့် psychostimulants စားသုံးမှု (Wee et al ။ , 2009). Fuentealba et al ။ (၂၀၀၇) U69593 ကို KOR agonist အဖြစ်အုပ်ချုပ်ပြီးလေးရက်အကြာမှာ NAc မှာ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးမြှင့်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက KORs ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် amphetamine ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော locomotor sensitization စဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်သော dorsal striatum ကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုပြသသည်။Azocar et al ။ , 2019) ။ စုစုပေါင်းအချက်အလက်များအရ KORs ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး၏အပြုသဘောဆောင်သော - အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုထားသည်။Chartoff et al ။ , 2016).
ထို့အပြင် KORs ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုတွင်ပါ ၀ င်မှုရှိပုံရသည်။ KORs ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ကိုကင်းလျှော့ချသည် (Wee et al ။ , 2009), ဘိန်းဖြူ (Schlosburg et al ။ , 2013) နှင့်စိတ်ကြွဆေး (Whitfield et al ။ , 2015) အကန့်အသတ်ဖြင့်သာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနိုင်သောကြွက်များကိုစားသုံးခြင်း (Wee et al, 2009) ။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းစိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုတွင်သက်သေပြနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် KOR နောက်ကောက်ကြွက်များသည်ဖိအားပေးမှုကြောင့်ရေကိုသောက်ပြီးနောက်ကိုကင်းနေရာကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါ။McLaughlin et al ။ , 2006a) ။ KORs များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ရေကူးစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောနီကိုတင်းနေရာကို ဦး စားပေးမှုကိုလျော့ကျစေသည်။Smith က et al ။ , 2012) ။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာ KOR ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောကိုကင်းနှင့်နီကိုတင်းရှာဖွေမှုကိုအားဖြည့်ပေးသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးစိန်ခေါ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ရှာဖွေမှုကိုမထိခိုက်ခဲ့ပါ။Beardsley et al ။ , 2005; မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် et al ။ , 2013) ။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောဤစည်းရုံးရေးမှူး KOR ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆု / လှုံ့ဆော်မှုပေးသော circuit မှကမကထပြုထားပုံရသည် (Shippenberg et al ။ , 2007; Wee နှင့် Koob, 2010) ။ ဒေါက်တာ Kauer နှင့်သူမ၏အဖွဲ့၏လေ့လာမှုအရ VTA တွင် KOR များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ယခင်ကသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပြီးနောက်ကိုကင်းကိုပြန်လည်ရှာဖွေခြင်းသည်ရေရှည်ကိုကယ်တင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသည်။ dopamine အာရုံခံအတွက် inhibitory synapses ၏အာနိသင်Graziane et al ။ , 2013; Polter et al ။ , 2014).
KORs ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကြွဆေးများစားသုံးမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကိုကင်းထိတွေ့မှုမတိုင်မီ KOR agonist U50488 ၁ နာရီ၏အုပ်ချုပ်မှုသည်ကိုကင်းအား ဦး စားပေးမှုနှင့် NAc ရှိကိုကင်းမှထုတ်ယူသောဆွေမျိုး dopamine ထုတ်လွှတ်မှုနှစ်မျိုးလုံးအားအလားအလာရှိစေသည်။McLaughlin et al ။ , 2006a; Ehrich et al ။ , 2014) ။ intracranial Self- ဆွအသုံးပြုခြင်း Chartoff et al ။ (၂၀၁၆) KOR ၏ agonist Salvinorin A သည်ကန ဦး ဆန့်ကျင်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပြီး NAc တွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်အသီးသီးသက်ရောက်သည်။ ဤအချက်အလက်များအားလုံးသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအနေဖြင့် KOR ကိုသက်ရောက်စေသည့်ကိုကင်းဓာတ်၏ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုညွှန်ပြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုတိုးပွားစေရန်အဓိကကစားသမားအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုများသော KOR ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်။
Quinpirole- သွေးဆောင် Locomotor အာရုံခံခြင်းနှင့် compulsive အပြုအမူ
dopamine system သည် sensitization နှင့် compulsivity ဖြစ်ပေါ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သော D2R agonist quinpirole နှင့်ကုသသောကြွက်များတွင်တွေ့ရှိရသောအပြုအမူအားဖြင့်ပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ အတိုချုပ်, D2Rs ကျယ်ပြန့်ဆုလာဘ် / လှုံ့ဆော်မှု circuit ကိုအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆို Gi coupled receptors ဖြစ်၏ သူတို့ somatodendritically နှင့် dopamine အာရုံခံ၏ axon ဆိပ်ကမ်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ် (Sesack et al ။ , 1994), နှင့်၎င်း၏ activation dopamine extracellular အဆင့်ဆင့်လျော့နည်းစေသည် (Imperato နှင့် Di Chiara, 1988) ။ အဆိုပါ striatum ခုနှစ်, D2Rs ကိုလည်းအလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် postynaptically တည်ရှိသည် (Sesack et al ။ , 1994) နှင့်၎င်း၏ activation locomotor လှုပ်ရှားမှုခွင့်ပြုသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းတားစီး။
ဒေါက်တာဟင်နရီဆတ်ခ်ျမန်သည် quinpirole ၏သက်ရောက်မှုများကို ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်ဆယ်စုနှစ်များကုန်ဆုံးသည့်ကြွက်များ၏အပြုအမူကိုစတင်လေ့လာခဲ့သည်။ သူတို့၏ကန ဦး တွေ့ရှိချက်များအရ quinpirole ၏ပြင်းထန်သောအုပ်ချုပ်မှုသည် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ဆေးမှီခိုသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အနိမ့်ဆေးများ (1980 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) မှာက locomotor လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းစေ, ပိုမိုမြင့်မားဆေးများ (> 0.03 mg / kg) မှာ, တိုးပွားလာသည်။ (Eilam နှင့် Szechtman, 1989) ။ ဤရွေ့ကားအကျိုးသက်ရောက်မှုများအသီးသီး (High- ဆှဖှေဲ့ presynaptic D2Rs နှင့်အနိမ့်ဆှဖှေဲ့ postsynaptic D2Rs ၏ activation နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Usiello et al ။ , 2000) ။ မမျှော်လင့်ဘဲ, quinpirole ၏ထပ်ခါတလဲလဲ (အခြားနေ့က) အုပ်ချုပ်ရေး psychostimulants အားဖြင့်သွေးဆောင်သည့် locomotor sensitization နှင့်ဆင်တူ, ရွေ့လျားအတွက်တဖြည်းဖြည်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးဖြစ်ပေါ်Szechtman et al ။ , 1993; Szechtman et al ။ , 1994) ။ ဒီ receptor အတွက်လစ်လပ်ကြွက် quinpirole မှ locomotor sensitization ဖွံ့ဖြိုးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆိုပါ locomotor sensitizing အကျိုးသက်ရောက်မှု, D2Rs အပေါ်မူတည်ကြောင်းပြသခဲ့သည်Escobar et al ။ , 2015).
၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစတွင် Szechtman နှင့် Eilam တို့သည်ကြွက်များကိုအာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့်အတူကြွက်များသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးပြုမူမှုကိုတီထွင်ခဲ့ကြပြီး quinpirole ၏အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုစီနှင့်ပိုမိုအားဖြည့်ခဲ့သည် (Eilam နှင့် Szechtman, 1989; Szechtman et al ။ , 1993) ။ ယနေ့ quinpirole ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှု OCD များအတွက်အတည်ပြုမော်ဒယ် (Szechtman et al ။ , 1999; Szechtman et al ။ , 2001; Eilam နှင့် Szechtman, 2005; Stuchlik et al ။ , 2016; Szechtman et al ။ , 2017), ကြွက်များ၏အပြုအမူပို။ ပို။ စနစ်တကျနှင့်တင်းမာနေဖြစ်လာကြောင်းလေ့လာရေးအပေါ်အခြေခံပြီး compulsive စစ်ဆေးခြင်းအပြုအမူ၏ရိုးရာဓလေ့အပြုအမူ၏ဆင်တူ (Szechtman et al ။ , 1998; Szechtman et al ။ , 2017) ။ လတ်တလောလေ့လာမှုများအရထပ်ခါတလဲလဲ quinpirole သည်ကြွက်များအတွင်း compulsive verching ကဲ့သို့သော compulsive အပြုအမူများကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းပြသခဲ့သည်။နေရောင် et al ။ , 2019), အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် compulsive ဝါးAsaoka et al ။ , 2019), အဆုံးစွန်သောထပ်မံထပ်ခါတလဲလဲ D2Rs activation compulsive အပြုအမူတွေကိုသွေးဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပံ့, striatum အတွက် D2Rs ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ပြန်ပြောင်း။ အတူတူဒေတာ locomotor sensitization နှင့် compulsivity သွေးဆောင်ဖို့ midbrain dopamine လမ်းကြောင်းအတွင်း D2Rs ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ to မှထောက်ပြသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ quinpirole အုပ်ချုပ်မှုသည်ကိုကင်း - သွေးဆောင်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်း။Thompson က et al ။ , 2010) နှင့် amphetamine ၏ locomotor သက်ရောက်မှုများ (ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင် et al ။ , 2010), D2Rs activation psychostimulant- သွေးဆောင် sensitization အခြေခံနှင့် quinpirole နှင့် psychostimulants- သွေးဆောင် sensitization အကြားမျှဝေယန္တရားအကြံပြုသောစိတ်ကူးအားဖြည့်။ quinpirole နှင့်ဆက်ဆံသည့်ကြွက်များသည် locomotor sensitization (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်) ကတည်းကစိတ်ဝင်စားစရာကထပ်ခါတလဲလဲ D2Rs activation ၏ sensitizing effect သည် psychostimulants များကသွေးဆောင်ခြင်းထက်ပိုမိုအားကောင်းနေပုံရသည်။Escobar et al ။ , 2015ကြွက်များ၏ ၆၀ ရာနှုန်းခန့်သည်အမ်ဖီတမင်း (sensithet) ကိုခံစားနေစဉ်။Escobar et al ။ , 2012; Casanova et al ။ , 2013).
D2Rs ထပ်ခါတလဲလဲ activation အားဖြင့်သွေးဆောင်အပြုအမူ sensitization ဆုကို / လှုံ့ဆျောမှု circuit ကိုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ quinpirole နှင့်အတူ sensitized ကြွက် NAc အတွက်နိမ့် dopaminergic သေံရှိသည် Basal လျော့နည်းသွားအဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိ (Koeltzow et al ။ , 2003) နှင့်လုပ်သူများနှင့် phasic dopamine လွှတ်ပေးရန် (Escobar et al ။ , 2015), dopamine midbrain circuit ကို၏လျော့နည်းသွား dopamine လွှတ်ပေးရန်စွမ်းရည်ကိုညွှန်း။ DNA ၏ Synaptic dopamine အဆင့်များကို DAT နှင့် dopamine neuron လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံး၏လုပ်ဆောင်မှုဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။goto နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2008), သော Vivo အတွက် လုပ်သူများနှင့်ပေါကျကှဲပစ်ခတ်မှုပါဝင်ပါသည် (Wilson က et al ။ , 1977; ကျေးဇူးတော်နှင့် Bunney, 1980) ။ ယခင်အစီရင်ခံစာများအရ quinpirole-sensitized ကြွက်များသည် tonic တွင် dopamine neuron နည်းပါးပြီး VTA တွင်ပြင်းထန်သောပစ်ခတ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။Sesia et al ။ , 2013) ။ အတူတူဤအချက်အလက်ဒေတာ quinpirole sensitization ပြီးနောက်မြင် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ကျဆင်းခြင်း dopamine အာရုံခံ၏အလုံးစုံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကျဆင်းခြင်း၏ရလဒ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ quinpirole နှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲကုသမှုကသွေးဆောင်အဆိုပါ compulsive အပြုအမူများနှင့် sensitized locomotor လှုပ်ရှားမှုဟာ NAc အတွက် dopaminergic သေံလျော့နည်းသွားကြောင့် D2Rs ၏ sensitization ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ် quinpirole-sensitized ကြွက် dopamine D2R ၏စည်းနှောင်တစ်ခုတိုးလာပြသCulver et al ။ , 2008) နှင့်ဤ receptors များ၏ဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုတိုးလာPerreault et al ။ , 2007), ဒီအယူအဆကိုထောက်ပံ့။
Quinpirole- သွေးဆောင် compulsive အပြုအမူအတွက် KOR-Dopamine interaction က
D2R- သွေးဆောင် compulsive အပြုအမူများတွင် KOR ၏အခန်းကဏ္ regarding နှင့်ပတ်သက်။ ကန ဦး လေ့လာမှုများကိုလည်း Szechtman ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေလာတယ်။ ဤအုပ်စုသည် KOR agonist U69593 ၏တွဲဖက်အုပ်ချုပ်ရေးကို locomotor လှုပ်ရှားမှုတွင် quinpirole ဖြင့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်စာရေးသူများအနေဖြင့် U69593 နှင့် quinpirole ရောစပ်။ ကြွက်များအားအရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးခြင်းကို ၈ ကြိမ်မှ ၁၀ ကြိမ်အထိမပြီးမချင်းထိုးပေးခဲ့သည်။ U8 တစ် ဦး တည်း၏ hypolocomotor အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်, quinpirole ၏အနိမ့် (presynaptic) နှင့်မြင့်မားသော (postsynaptic) ဆေးများနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းအုပ်ချုပ်သောအခါ hyperlocomotion လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ U10 သည် quinpirole ၏ presinaptic ဆေး၏ hypolocomotor အကျိုးသက်ရောက်မှုကို hyperlocomotion သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး quinpirole ၏ postynaptic ဆေး၏ hyperlocomotor အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။Perreault et al ။ , 2006) ။ KORs ၏ Co-activation သည် locomotor sensitization ၏ induction ကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ D2Rs activation ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ပေးခြင်းဖြင့်နှစ်ဆကုသမှုမှရရှိသောအမြင့်ဆုံးရွေ့လျားမှုသည် quinpirole တစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော locomotor effect ကိုထပ်တူကျစေသည် (Perreault et al ။ , 2006; Escobar et al ။ , 2017) ။ KORs များပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတိုးပွားလာခြင်းကိုလည်းအရှိန်မြှင့်စေသည် (Perreault et al ။ , 2007) ။ quinpirole- သွေးဆောင်အပြုအမူအပေါ် KORs ၏ဤ potentiating သက်ရောက်မှု KORs ထပ်တလဲလဲ activation လိုအပ်သည်။ တကယ်တော့, KOR agonist U69593 ၏စူးရှသောဆေးထိုး quinpirole နှင့်အတူ sensitized ကြွက်များတွင် locomotor လှုပ်ရှားမှုနောက်ထပ်ပြုပြင်မပေးခဲ့ပါဘူး (Escobar et al ။ , 2017) ။ D2R- သွေးဆောင် sensitization potentiating KOR ၏ယန္တရားမသိနိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာ endogenous kappa opioid system သည် D2R-based sensitization ကိုဖျန်ဖြေပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤဖြစ်နိုင်ခြေကို norBNI ၏ကြိုတင်အုပ်ချုပ်မှုက quinpirole သို့ locomotor sensitization ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့် dynorphin ၏အောက်ပိုင်း D2R activation ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းမရှိကြောင်းပြသခြင်းအားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည် (Escobar et al ။ , 2017) ။ ဒီအချက်အလက်တွေက dynorphin ဟာ compulsive အပြုအမူတွေကိုအာရုံစိုက်ရာမှာအခန်းကဏ္ have တစ်ခုရှိနိုင်တယ်ဆိုတာမဖော်ပြပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စိတ်ဖိစီးမှုသည် dynorphin ကိုလွှတ်ပေးရန်နှင့် KORs ကို activation လုပ်ခြင်းဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေသည်။McLaughlin et al ။ , 2003; McLaughlin et al ။ , 2006a; McLaughlin et al ။ , 2006b).
D2Rs နှင့် KORs အကြားကွဲလွဲမှုကရှုပ်ထွေးပြီးအဲဒီ receptors နှစ်ခုစလုံးရဲ့ activation တိုက်ဆိုင်သလားသို့မဟုတ်ယာယီကွဲကွာခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များအရ D2Rs နှင့် KORs အကြား crosstalk သည် axon နှင့် dopamine neuron ၏ soma များနှင့် striatum ၏ MSN များတွင် postynaptically ဖြစ်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြသည်။ အခြား neurochemical systems ၏ axon များပေါ်တွင်တည်ရှိသော KORs အတွက်အခန်းကဏ္outကိုမတားမြစ်သော်လည်းခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည် D2Rs ကိုထိန်းညှိသော KORs ၏တိုက်ရိုက်အခန်းကဏ္toကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ညွှန်ပြသည်။ စူးရှသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်စေ, KORs ၏ activation dopamine အာရုံခံအပေါ် inhibitory D2Rs function ကိုလျော့နည်းစေသည်။ Electrophysiology လေ့လာမှုများအရ VTA နှင့် SN ၏ dopamine neurons များတွင် KOR ၏စူးရှသော activation သည် D2R-mediated inhibitory postsynaptic current ကိုတားဆီးသည်Ford ကား et al ။ , 2007) ။ အာရုံကြောဓာတုလေ့လာမှုများ KORs ၏ထပ်ခါတလဲလဲ activation အဆိုပါ NAc အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန် D2R- သွေးဆောင်တားစီးပိတ်ပင်တားဆီးမှုကြောင်းပြသခဲ့သည်Fuentealba et al ။ , 2006) ။ ထို့အပြင်တိုက်ဆိုင်သည့် D2R နှင့် KORs များစူးရှသော activation သည် NAc တွင် dopamine ထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုတားစီးမှုတစ်ခုချင်းစီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျော့နည်းစေသည် (Escobar et al ။ , 2017) ။ ထို့ကြောင့် Presynaptic KORs သည်ထပ်ဖြည့်သို့မဟုတ် presynaptic D2Rs နှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ KORs သည် D2R inhibitory effect ကိုတားစီးပိတ်ပင်တားဆီးနိုင်သည်။ ဤသည်ယန္တရားသည် locomotor ကိုသက်ဝင်စေသည့်သက်ရောက်မှုကို quorpirole ပမာဏနှင့်အတူတွဲဖက်ဖြစ်သော KOR agonists ၏ပြင်းထန်သောပမာဏကိုရှင်းပြနိုင်သည်။Perreault et al ။ , 2006).
မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုအရ VTA တွင် KOR ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည်အပြုအမူအားတားဆီးမှုနှင့်စကျင်ကျောက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းတို့ကဲ့သို့တိုင်းတာသည့်မလိုက်နာသည့်အပြုအမူကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။အာဗြဟံသည် et al ။ , 2017), KORs activation အမှန်ပင် compulsivity များအတွက်အစပျိုးသောစိတ်ကူးအားဖြည့်။ ကထုတ်ဝေဒေတာ Margolis et al ။ (2006); 2008) KORs နှင့် D2Rs အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည် mPFC ကိုပစ်မှတ်ထားသော dopamine neuron များပေါ်တွင်ပြုလုပ်သင့်ကြောင်းဖော်ပြသည် (Margolis et al ။ , 2006; Margolis et al ။ , 2008) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, Ford et al ။ (2006); 2007) D2R-mediated IPSC ၏ KORs တားစီးသည့် NAc ပစ်မှတ်ထား dopamine အာရုံခံအပေါ်ရာအရပျကိုယူတွေ့ရှိခဲ့ (Ford ကား et al ။ , 2006; Ford ကား et al ။ , 2007) ။ အတူတူဒီဒေတာပြသ dopamine အာရုံခံ၏ somatodendritic အခန်းမှာ D2R နှင့်အတူ KOR အပြန်အလှန်အတူတူ dopamine အာရုံခံအတွက် crosstalk ၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းနိုင်ပြသပါ။ ဤသည် mesolimbic သို့မဟုတ် mesocortical စီမံကိန်းများတွင်ဖြစ်ပျက်ရှိမရှိအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ထူးခြားသည်မှာ KOR ကို NAc ၏ MSNs တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည် (Escobar et al ။ , 2017; Tejeda et al ။ , 2017), အရှင် D2R- သွေးဆောင် compulsive အပြုအမူများ၏စွမ်းရည်ကိုလည်း dopamine အာရုံခံ၏ပစ်မှတ်ဆဲလ်တွေအပေါ်တိုက်ရိုက်လုပ်ရပ်များအားဖြင့်ပေါ်ထွန်းနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ။ ဤကိစ်စ၌, U69593 ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်အတွက် D2Rs ပမာဏတိုးပွားလာကြောင်းဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်Perreault et al ။ , 2007) ။ အာရုံကြောဓာတုဒေတာလျော့နည်း dopamine extracellular အဆင့်ဆင့် D2Rs sensitization ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ KORs Co-activation သည် NAc ရှိထပ်ဆင့်ဆဲလ်အဆင့်ဆင့်ထပ်မံကျဆင်းခြင်းမရှိသော်လည်း D2Rs ၏ထပ်ခါတလဲလဲ activation ကြောင့်လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိချေ။Escobar et al ။ , 2017), ဤယန္တရားမှတဆင့် NAc အတွက် D2Rs ၏ sensitization အရှိန်အဟုန်မြှင့်သို့မဟုတ်အလားအလာ presynaptic KORs များအတွက်အခန်းကဏ္ out ထုတ်အာဏာ။ ထို့ကြောင့်, KORs နောက်ထပ် locomotion sensitization တိုးမြှင့်တစ်ခုသပ္ပါယ် postsynaptic ထက် presynaptic အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြု, နောက်ထပ် D2Rs ၏အာရုံကြောနှင့်အပြုအမူသက်ရောက်မှု sensitize ကြောင်းနှေးကွေးမော်လီကျူးယန္တရားများဖြစ်ပေါ်။ ဤကိစ်စတှငျ KORs ၏ထပ်ခါတလဲလဲ activation သည် D2R / D1R ချိန်ခွင်လျှာကို D2R သို့သွယ်ဝိုက်သန္ဓေသားလမ်းကြောင်းမှတားဆီးနိုင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ပုံ 1).
ပုံ 1 Kappa Opioid Receptors (KOR) ၏စုစည်းထားသောအစီအစဉ်သည်တိုက်ရိုက် (D1R) နှင့်သွယ်ဝိုက် (D2R) striatal ပုံစံများကိုထိန်းချုပ်သည်။ (က) KOR သည် dopamine ဆိပ်ကမ်းများ၌ကြိုတင်သင်္ကေတတည်ရှိပြီးအလယ်အလတ်အာရုံခံ (MSNs) တွင် sinaptically တင်ထားသည်။ ၄ င်း၏ activation သည် dopamine extracellular level ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီး dopamine transporter (DAT) နှင့် dopamine D2 receptors များနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ (ခ) psychostimulant နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ dopamine extracellular အဆင့်ဆင့်နှင့် dynorphin နှစ် ဦး စလုံးအတွက်တိုးဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ D1 နှင့် D2 receptors များ၏ activation သည် locomotor sensitization ကိုမြှင့်တင်သော D1R တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းသို့ချိန်ခွင်လျှာကိုပြောင်းသည်။ (C) quinpirole နှင့် U69593 တို့၏တွဲဖက်အုပ်ချုပ်မှုက dopamine extracellular level ကိုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ KOR နှင့် D2 receptors ၏တစ်ပြိုင်နက်တည်း activation compulsive အပြုအမူသွေးဆောင် D2 သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း debilitates ။
compulsive အပြုအမူတွေမှာ KOR-Dopamine အပြန်အလှန်လိင်ကွဲပြားမှု
လက်တွေ့လေ့လာမှုများကမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းအပါအ ၀ င်၊ အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယောက်ျားများတွင် OCD ၏အစောပိုင်းလက္ခဏာများကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့သည် (Mathis et al ။ , 2011), အမျိုးသမီးများညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးလက္ခဏာတွေပိုမိုပျံ့နှံ့ဖေါ်ပြခြင်းနှင့်အတူ (Labad et al ။ , 2008) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားများအရအမျိုးသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပိုမိုများပြားသော်လည်းအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုရှိကြောင်းညွှန်ပြထားသည်။ဟာနန်ဒက်ဇ် -Avila et al ။ , 2004; Fattore နှင့် Melis, 2016).
မကြာသေးမီကလက်တွေ့အကြိုလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားများသည်လက်တွေ့လေ့လာမှုများတွင်တွေ့ရသောမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုကိုအခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအခြေခံများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။Becker နှင့် Chartoff, 2019) ။ အဘယ်သူမျှမ - အသားတင် flux microdialysis ကိုအသုံးပြု။ အစောပိုင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက် dorsal striatum အတွက် dopamine extracellular အာရုံစူးစိုက်မှု eststr သံသရာကာလအတွင်း diestrus နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် proestrus နှင့် estrus အတွက်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ovariectomy သည်ကြွက်များတွင် striatal dopamine ၏ extracellular အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျော့ကျစေပြီး၊ ကြွက်များ၏သန္ဓေတည်ခြင်းသည် dopamine striatal extracellular အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြုပြင်မထားပါ။Xiao နှင့် Becker, 1994dopamine လှုပ်ရှားမှုတွင်သားဥအိမ်၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္suggestကိုအကြံပြုခြင်း။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အမျိုးသမီးဟော်မုန်း psychostimulants မှတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိ။ အစောပိုင်း စသည်တို့အတွက် စမ်းသပ်ချက်များအရ estradiol နှင့်ပရိုဂျက်တာရွန်တို့သည်အူဖီတီးမင်းသွေးဆောင်သော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအား ovariectomized အမျိုးသမီးကြွက်များအားပြန်လည်ရရှိစေကြောင်းပြသခဲ့သည်။Becker ကနှင့် Ramirez, 1981) ။ မကြာသေးမီကမြန်ဆန်စွာ scan လုပ်သော cyclic voltammetry လေ့လာမှုများအရအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျှပ်စစ်အားဖြင့်လှုံ့ဆော်သော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်စားသုံးမှုကိုပိုမိုပြသခဲ့သည်။Walker က et al ။ , 2000) ။ dopamine neurotransmission ၌ဤလိင်ကွဲပြားမှုများသည်အမျိုးသမီးများ၌ကိုကင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောကိုကင်းနှင့်အမ်ဖီတမင်းရှာဖွေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (ရောဘတ် et al ။ , 1989; ကော့ et al ။ , 2013).
dopamine extracellular အဆင့်များအပေါ် KOR ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေသည်လိင်ကွဲပြားမှုကိုပြသခဲ့သည်Chartoff နှင့် Mavrikaki, 2015) ။ intracranial မိမိကိုယ်ကိုနှိုးဆွခြင်းနှင့်သိသိ voltammetry ကိုသုံးခြင်း၊ Conway et al ။ (2019) အထီးကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိ KOR agonist ၏စူးရှ anhedonic အကျိုးသက်ရောက်မှုမှအနိမ့် sensitivity ကို, NAc အတွက်လှုံ့ဆော် dopamine လွှတ်ပေးရန်တစ်ခု attenuated တားစီးဖြင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းပြသခဲ့သည်Conway et al ။ , 2019) ။ KOR ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ကြွက်များတွင်တွေ့ရသော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုတားဆီးပိတ်ပင်တားဆီးရန် estradiol ကိုအထောက်အကူပြုသည်ဟုအကြံပြုထားသည် (အာဗြဟံသည် et al ။ , 2018) ။ KORs နှင့် dopamine အချက်ပြမှုအကြား crosstalk ကိုယောက်ျားများတွင်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည် (Tejeda နှင့် Bonci, 2019), ဒီအပြန်အလှန်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်စွဲလုပ်ငန်းစဉ်၌၎င်း၏သက်ရောက်မှုအပေါ်သုတေသနချို့တဲ့နေသည် (Chartoff နှင့် Mavrikaki, 2015) ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် KOR agonist U69593 ၏အုပ်ချုပ်မှုစနစ်သည်ကိုကင်းကိုသွေးဆောင်သော hyperlocomotion ကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့် ovariectomized ကြွက်များကိုထိန်းချုပ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, U69593 ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခု estradiol- မှီခိုထုံးစံ၌ကိုကင်း - သွေးဆောင် hyperlocomotion attenuated (Puig-Ramos et al ။ , 2008) ။ ဤအချက်အလက်များအရ estradiol သည်ကြွက်များတွင် KOR ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုထိန်းချုပ်သည်၊ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတွင်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်နွှယ်နိုင်သည်။Puig-Ramos et al ။ , 2008) ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် KORs ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းသည်အထီးတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း striatal dopamine ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။
psychostimulant သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ပံ့ပိုးအထီးကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးသမီးမှာလေ့လာတွေ့ရှိပေမယ့် amphetamine locomotor sensitization အခြေခံ dopamine ယန္တရားများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကိုအပြည့်အဝဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေBecker က, 1999) ။ အမ်ဖီတမင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုသည်ဆယ်ကျော်သက်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောစက်ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။Mathews နှင့်မက်ကော်မစ်, 2007) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးကြွက် (Milesi-Hallé et al ။ , 2007အမ်ဖီတမင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်တစ် ဦး ထက်ပိုသောကြံ့ခိုင် locomotor sensitization ဖေါ်ပြခြင်းအမျိုးသမီးဆယ်ကျော်သက်ကြွက်နှင့်အတူ။ ,) D2 receptor ၏မွေးကင်းစကလေးများ activation အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်သာအမ်ဖီတမင်းသွေးဆောင်အပြုအမူ sensitization potentiated (ဘရောင်း et al ။ , 2011) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ D2 agonist သည်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်တူသောအပြုအမူကို DXNUMX agonist နှင့်ထပ်ခါတလဲထိတွေ့ခြင်းကိုအထီးကြွက်များတွင်တွေ့ရသည်။Dvorkin et al ။ , 2006) ။ ထို့အပြင် KOR ၏ Co-activation သည် NAc ရှိ DA လွှတ်ပေးမှုအပေါ် D2 receptors ၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့, quinpirole မှအကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့မှုကြောင့်သွေးဆောင်သည့် locomotor sensitization potentiates (Escobar et al ။ , 2017) ။ အမျိုးသမီးများ၏ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်တွင် KOR ၏တားစီးမှုသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာမှုနိမ့်ကျသည့်သိသာသောလိင်ကွဲပြားမှုများ (Conway et al ။ , 2019) မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုတွင် KOR ၏မတူညီသောထည့် ၀ င်မှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
လှုံ့ဆော်သောအပြုအမူများကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြရန် KORs သည် dopamine အချက်ပြမှုကိုမည်သို့ modulate လုပ်သနည်း။ ခန္ဓာဗေဒဒေတာ KORs midbrain dopamine အာရုံခံ၏ synaptic လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ဖို့လက်ရာမြောက်စွာနေရာယူထားဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ အလုပ်လုပ်သောအချက်အလက်များအရ KORs သည် DAT နှင့် D2R လည်ပတ်မှုနှင့် dopamine neuron ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုထိန်းချုပ်သည်ကိုညွှန်ပြသည်။ KORs များပြင်းထန်စွာစတင်ခြင်းသည်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးများကြောင့် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျော့နည်းစေကြောင်းပြသသည့်ကန ဦး အထောက်အထားများအရ KOR ၏ထပ်ခါတလဲလဲ activation သည် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုလွယ်ကူချောမောစေသည်။ မွေးကင်းစဒေသများမှတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်ထွက်ရှိသည့်လမ်းကြောင်းများ (Dopamine အချက်ပြအချက်အလက်) သည်ပုံ 1A) ။ D1R နှင့် D2R နှစ်ခုစလုံးကိုသက်ဝင်စေသော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေသော psychostimulants ဖြင့်နာတာရှည်နှိုးဆွမှုဖြစ်စေ (ပုံ 1B) သို့မဟုတ် D2R ကိုသာသက်ဝင်စေသည့် quinpirole (ပုံ 1C) D2R တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းသို့ချိန်ခွင်လျှာကိုပြောင်းလဲ, တစ် ဦး debilitated D1R သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအားဖြင့် locomotor sensitization နှင့် compulsive အပြုအမူအတွက်ရလဒ်များ။ striatal D1 အာရုံခံဆဲလ်များတွင် dynorphin များတိုးပွားလာခြင်းဖြင့်နာတာရှည် psychostimulant စားသုံးမှုအတွင်း KOR ဂီယာကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ပုံ 1B) ။ U69593 ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့် OCD ၏ဆေးဝါးဗေဒပုံစံတွင်တိုးမြှင့်ထားသော KOR ဂီယာကိုတုပသည်။ ဤသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် KOR activation သည် D2 သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းကိုထပ်မံလျော့နည်းစေသည်။ပုံ 1C) ။ အနာဂတ်သုတေသနအနေဖြင့် DAT လှုပ်ရှားမှုအပေါ် KOR သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှု၏အကျိုးဆက်များကိုအပြည့်အဝဖော်ထုတ်ရန်၊ quinpirole သွေးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိ endIDS KOR စနစ်၏အခန်းကဏ္understandကိုနားလည်ရန်နှင့် KOR စနစ်၏ပါဝင်မှုကိုမသန်စွမ်းသောအပြုအမူများ၌ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်ပြုလုပ်သင့်သည်။
AE, MA နှင့် JF တို့သည်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည်။ AE နှင့် JF တို့သည်စာမူ၏ပထမဆုံးမူကြမ်းကို MA မှထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။ MA နှင့် JC တို့သည်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သောစာမူကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်တည်းဖြတ်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ အားလုံးစာရေးသူထုတ်ဝေဘို့ကအတည်ပြုခဲ့သည်။
ဤသုံးသပ်ချက်တွင်ကိုးကားထားသည့်စာရေးသူများ၏အလုပ်ကို FONDECYT ထောက်ပံ့ငွေနံပါတ်များမှထောက်ခံထားသည် - ၁၁၁၀၃၅၂ နှင့် ၁၁၅၀၀၂၀၀ MA သို့၊ JF မှ 1110352; JF မှ DIPOG ထောက်ပံ့ငွေ 1150200; AE မှ JC နှင့် 1141088 မှ FONDECYT ပါရဂူသူချင်း 391340281 ရန်။
ကိုင်တွယ်သည့်အယ်ဒီတာသည်စာရေးသူ JF နှင့်သုတေသနခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုစီစဉ်နေပြီးအခြားမည်သည့်ပူးပေါင်းမှုမှမရှိခြင်းကိုအတည်ပြုသည်။
အာဗြဟံ, အေဒီ, Fontaine, HM, သီချင်း, AJ, Andrews က, MM, Baird, MA, Kieffer, BL, et al ။ (2017) ။ dopamine အာရုံခံအတွက် Kappa opioid အဲဒီ receptor activation အပြုအမူတားစီးနှောင့်အယှက်။ Neuropsychopharmacology 43 (2), 362-372 ။ Doi: 10.1038 / npp.2017.133
PubMed Abstract | CrossRef အပြည့်အဝစာသား | Google Scholar
အာဗြဟံ, အေဒီ, Schattauer, အက်စ်အက်စ်, Reichard, KL, Cohen ကို, JH, Fontaine, HM, သီချင်း, AJ, et al ။ (2018) ။ GRK2 ၏အက်စထရိုဂျင်စည်းမျဉ်းသည် analgesia ကိုကြားခံဖြန်ဖြေပေးသည့် kappa opioid receptor အချက်ပြမှုကိုမတားဆီးပါ။ ဂျေ neuroscience ။ 38 (37), 8031-8043 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.0653-18.2018
Asaoka, N. , Nishitani, N. , Kinoshita, H. , Nagai, Y. , Hatakama, H. , Nagayasu, K. , et al ။ (2019) ။ တစ် ဦး adenosine A2A အဲဒီ receptor ရန်ထပ်ခါတလဲလဲ quinpirole- သွေးဆောင်စိတ်ရောဂါမျိုးစုံလက္ခဏာတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်။ eNeuro6(1), 1-16 ။ ENEURO.0366-18.2019 ။ Doi: 10.1523 / ENEURO.0366-18.2019
CrossRef အပြည့်အဝစာသား | Google Scholar
Atigari, DV, Uprety, R. , Pasternak, GW, Majumdar, S. , Kivell, BM (2019) ။ MP1104, kappa-delta opioid receptor agonist သည်ကြွက်များတွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျော့နည်းစေပြီးကိုကင်းဆန့်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ Neuropharmacology 150, 217-228 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2019.02.010
Azocar, VH, Sepúlveda, G. အ, Ruiz, C၊ Aguilera, C, Andrés, ME, Fuentealba, JA (2019) ။ kappa-opioid အဲဒီ receptor ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဟာ amphetamine sensitization အတွင်း dorsolateral striatum dopamine ဒိုင်းနမစ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တာ။ ဂျေ Neurochem ။ 148, 348-358 ။ Doi: 10.1111 / jnc.14612
Béguin, C တို့, Potuzak, ဂျေ, Xu, ဒဗလျူ, လျူချန်, LY, Streicher, JM, Groer, အီး, et al ။ (2012) ။ 12-epi-salvinorin A နှင့်၎င်း၏ analog များ၏ kappa opioid receptor တွင် differential အချက်ပြဂုဏ်သတ္တိများ။ ဇီဝဗေဒ။ Med ။ Chem ။ နေ။ 15; 22 (2), 1023-1026 ။ Doi: 10.1016 / j.bmcl.2011.11.128
Beardsley, pm တွင်, Howard, JL, Shelton, KL, ကာရိုး, FI (2005) ။ kappa opioid receptor antagonist, JDTic ၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာခြေထောက်ဖိအားဖိအားများကြောင့်ကိုကင်း - ရှာဖွေခြင်းနှင့်ကိုကင်းပြန့်ပွားမှုနှင့်ကြွက်များတွင်၎င်း၏စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအပေါ် - JDTic ။ Psychopharmacol ။ (Berl) 183, 118–126. doi: 10.1007/s00213-005-0167-4
Becker က, JB, Chartoff, အီး (2019) ။ ဆုနှင့်စွဲဖျန်ဖြေအာရုံကြောယန္တရားများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Neuropsychopharmacology 44, 166–183. doi: 10.1038/s41386-018-0125-6
Becker က JB, Ramirez, VD (1981) ။ အမ်ဖီတမင်းအနေနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုသည်စကြောမှကြွက် မှနေ၍ တစ်ရှူးမှ catecholamines များကိုထုတ်လွှတ်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 204, 361–372. doi: 10.1016/0006-8993(81)90595-3
Becker က, JB (1999) ။ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopaminergic function ကိုအတွက်ကျားကွဲပြားခြားနားမှု။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 64, 803–812. doi: 10.1016/S0091-3057(99)00168-9
Berridge, KC, ရော်ဘင်ဆင်, TE (2016) ။ လိုချင်, လိုနှင့်စွဲ၏မက်လုံးပေး - sensitization သီအိုရီ။ နံနက်။ Psychol ။ 71, 670-679 ။ Doi: 10.1037 / amp0000059
Berridge, KC, Venier, IL, Robinson, TE (1989) ။ 6-hydroxydopamine- သွေးဆောင် aphagia ၏အရသာဓာတ်ပြုမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: dopamine function ကို၏ arousal နှင့် anhedonia ယူဆချက်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 103, 36-45 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.103.1.36
Broadbear, JH, Negus, SS, Butelman, ER, de Costa, BR, Woods, JH (1994) ။ mouse ကို writhing assay အတွက် kappa-opioid agonists အပေါ်စနစ်တကျအုပ်ချုပ် nor- binaltorphimine (မဟုတ်သလို -BNI) ၏ differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology 115, 311-319 ။ Doi: 10.1007 / BF02245071
ဘရောင်း, RW, Perna, MK, နို, DM, Whittemore, JD, Lehmann, ဂျေ, စမစ်, ML (2011) ။ quinpirole နှင့်အတူမွေးကင်းစအထီးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကြွက်များတွင် Amphetamine locomotor sensitization နှင့်အေးစက်တည်နေရာနေရာ preference ကို။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 22, 374–378. doi: 10.1097/FBP.0b013e328348737b
Bruchas, MR, Chavkin, C တို့ (2010) ။ Kinase ကက်စကိတ်နှင့် Kappa opioid receptor တွင် ligand- ညွှန်ကြားသည်အချက်ပြခြင်း။ Psychopharmacol ။ (Berl) 210, 137–147. doi: 10.1007/s00213-010-1806-y
Callaghan, CK, Rouine, ဂျေ, O'Mara, SM (2018) ။ လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက် opioid receptors များအတွက်အလားအလာအခန်းကဏ္။ ။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 239, 89-119 ။ Doi: 10.1016 / bs.pbr.2018.07.009
Carr က, DB, Sesack, SR (2000) ။ prefrontal cortex သို့ကြွက် ventral tegmental projectရိယာစီမံကိန်းတွင် GABA ပါဝင်သည့်အာရုံခံဆဲလ်များ။ synapses 38 (2), 114–123. doi: 10.1002/1098-2396(200011)38:2<114::AID-SYN2>3.0.CO;2-R
Casanova, JP, Velis, GP, Fuentealba, JA (2013) ။ Amphetamine locomotor sensitization သည်ကြွက် medial prefrontal cortex တွင်မြင့်မားသော K + -stimulated Dopamine ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အတူလိုက်ပါခြင်းဖြစ်သည်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 237, 313-317 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2012.09.052
Chartoff, EH, Mavrikaki, အမ် (2015) ။ kappa opioid အဲဒီ receptor function နဲ့လိင်ကွဲပြားမှုဟာသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။ တပ်ဦး။ neuroscience ။9466. Doi: 10.3389 / fnins.2015.00466
et al Chartoff, EH, Ebner, SR, Sparrow, အေ, Potter, D. , Baker, PM, Ragozzino, ME ။ (2016) ။ kappa opioid receptor ကိုသက်ဝင်စေခြင်းနှင့်ကိုကင်းအကြားနှိုင်းယှဉ်ချိန်ညှိမှုသည်ဆုနှင့် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်။ Neuropsychopharmacology 41, 989-1002 ။ Doi: 10.1038 / npp.2015.226
Chavkin, C တို့, Koob, GF (2016) ။ Dynorphin, dysphoria နှင့်မှီခိုမှု - စွဲလမ်းမှု၏ဖိစီးမှု။ Neuropsychopharmacology 41, 373-374 ။ Doi: 10.1038 / npp.2015.258
Chefer, VI ကို, Czyzyk, တီ, Bolan, EA, Moron, ဂျေ, Pintar, je, Shippenberg, တီအက်စ် (2005) ။ Endogenous kappa-opioid အဲဒီ receptor systems များသည် mesoaccumbal dopamine ဒိုင်းနမစ်နှင့်ကိုကင်းကိုအားနည်းစေတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 25, 5029-5037 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.0854-05.2005
Chefer, VI, Zapata, အေ, Shippenberg, TS, Bungay, pm တွင် (2006) ။ အရေအတွက်အဘယ်သူမျှမ -net-flux microdialysis mouse ကိုနျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine စားသုံးမှုအတွက်တိုးနှင့်လျော့နည်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိခွင့်ပြုပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ နည်းလမ်းများ 155, 187-193 ။ Doi: 10.1016 / j.jneumeth.2005.12.018
ကိုးလ်, RL, Konradi, C တို့, ဒေါက်ဂလပ်, ဂျေ, Hyman, SE (1995) ။ amphetamine နှင့် dopamine သို့အာရုံကြောလိုက်လျောညီထွေ: prodynorphin ဗီဇစည်းမျဉ်း၏မော်လီကျူးယန္တရားများကြွက် striatum ။ အာရုံခံဆဲလျ 14, 813–823. doi: 10.1016/0896-6273(95)90225-2
Conway, SM, Puttick, D. , စယ်, အက်စ်, Potter, D. , Roitman, MF, Chartoff, အီးအိပ်ချ် (2019) ။ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက် kappa opioid receptor activation ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့် dopamine- ဖိနှိပ်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ၌အမျိုးသားများထက်နည်းသည်။ Neuropharmacology 146, 231-241 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2018.12.002
Cope, ZA, Huggins, KN, Sheppard, AB, Noel, DM, Roane, DS, Brown, RW (2010) ။ မွေးကင်းစကလေး quinpirole ကုသမှု locomotor activation တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နျူကလိယအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်လူကြီးအတွက် amphetamine ကုသမှုတုံ့ပြန် core ကို accumbens ။ synapses 64, 289-300 ။ Doi: 10.1002 / syn.20729
ကော့, BM, လူငယ်, AB, ကြည့်ရှု, RE, Reichel, CM (2013) ။ ကြွက်များတွင်ရှာဖွေခြင်းစိတ်ကြွဆေးများလိင်ကွဲပြားမှု: oxytocin ၏သက်ရောက်မှု။ Psychoneuroendocrinology 38, 2343-2353 ။ Doi: 10.1016 / j.psyneuen.2013.05.005
Culver, KE, Szechtman, အိပ်ချ်, Levant, ခ (2008) ။ Ro 2-41 နှင့်အတူ Pre- ကုသမှု၏ဆိုးကျိုးများ: quinpirole မှအပြုအမူ sensitization နှင့်အတူကြွက်များတွင်စည်းနှောင် dopamine D1049 ကဲ့သို့အဲဒီ receptor ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 592, 67-72 ။ Doi: 10.1016 / j.ejphar.2008.06.101
Dalman, FC, O'Malley, KL (1999) ။ dopaminergic midbrain အာရုံခံ၏ယဉ်ကျေးမှုများတွင် kappa-Opioid သည်းခံစိတ်နှင့်မှီခိုမှု။ ဂျေ neuroscience ။ 19, 5750–5757. doi: 10.1523/JNEUROSCI.19-14-05750.1999
De Vries, TJ, Schoffelmeer, AN, Binnekade, R. , Raasø, H. , Vanderschuren, LJ (2002) ။ dopamine D2 receptors များကကမကထပြုသည့်ကင်းကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူရှာဖွေသည့်အမူအကျင့်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးခြင်းသည်အချိန်ကာလအားဖြင့်မှီခိုပြီးအမူအကျင့်ဆိုင်ရာအာရုံခံမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Neuropsychopharmacology 26, 18–26. doi: 10.1016/S0893-133X(01)00293-7
Devine, DP, Leone, P. , Pocock, D. , ပညာရှိ, RA (၁၉၉၃) ။ basal mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်၏မော်ဂျူအတွက် ventral tegmental mu, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် kappa opioid receptors ၏ differential ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှု: vivo microdialysis လေ့လာမှုများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 266, 1236-1246 ။
di Chiara, G. အ, Imperato, အေ (1988) ။ mu နှင့် kappa opiate agonists များ၏ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုများနျူကလိယ accumbens နှင့်ကြွက်များ၏ dorsal caudate တွင် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ် ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 244, 1067-1080 ။ Doi: 10.1073 / pnas.85.14.5274
Dvorkin, အေ, Perreault, ML, Szechtman, အိပ်ချ် (2006) ။ obsessive-compulsive ရောဂါတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက် dopamine agonist quinpirole ၏ထပ်ခါတလဲလဲထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် compulsive စစ်ဆေးခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ယာယီအဖွဲ့အစည်း။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 169, 303-311 ။ Doi: 10.1016 / j.bbr.2006.01.024
Ebner, SR, Roitman, MF, Potter, DN, Rachlin, AB, Chartoff, EH (2010) ။ အဆိုပါ kappa opioid အဲဒီ receptor agonist salvinorin တစ် ဦး ၏စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောသက်ရောက်မှုနျူကလိယ accumbens အတွက် phasic dopamine လွှတ်ပေးရေးနှင့်အတူဆက်စပ်နေကြသည်။ Psychopharmacol ။ (Berl) 210, 241–252. doi: 10.1007/s00213-010-1836-5
et al Edwards က, NJ, Tejeda, HA, Pignatelli, အမ်, Zhang က, အက်စ်, McDevitt, RA, Wu, ဂျေ။ (2017) ။ အဆိုပါ VTA ၏ inhibitory ဗိသုကာအတွက်တိုက်နယ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကို - သွေးဆောင်အပြုအမူကိုထိန်းညှိ။ နတ်။ neuroscience ။ 20 (3), 438-448 ။ Doi: 10.1038 / nn.4482
Ehrich, JM, Phillips က, PEM, Chavkin, C. (2014) ။ Kappa opioid receptor activation သည်မောက်စ်၏နျူကလိယတွင် Vivo တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော evoked dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတွင်ကိုကင်း - သွေးဆောင်မှုတိုးပွားစေသည်။ Neuropsychopharmacology 39, 3036-3048 ။ Doi: 10.1038 / npp.2014.157
eth Ehrich, JM, Messinger, DI, Knakal, CR, Kuhar, JR, Schattauer, SS, Bruchas, MR ။ (2015) ။ Kappa Opioid Receptor-Induced Aversion သည် VTA Dopamine Neurons တွင် p38 MAPK Activation လိုအပ်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 35, 12917-12931 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2444-15.2015
Eilam, D. , Szechtman, အိပ်ချ် (1989) ။ locomotion နှင့်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် D-2 agonist quinpirole ၏ Biphasic အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 161, 151–157. doi: 10.1016/0014-2999(89)90837-6
Eilam, D. , Szechtman, အိပ်ချ် (2005) ။ စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး - compulsive ရောဂါတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ် Psychostimulant- သွေးဆောင်အပြုအမူ: compulsive ထုံးတမ်း၏ပုံစံတစ်ခု ethological ချဉ်းကပ်မှု။ CNS Spectr ။ 10, 191-202 ။ Doi: 10.1017 / S109285290001004X
Escobar, AP, Cornejo, FA, Andrés, ME, Fuentealba, JA (၂၀၁၂) ။ အဆိုပါ kappa opioid အဲဒီ receptor agonist U2012 နှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲကုသမှုနျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးမြှင့် K + သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်, ဒါပေမယ့်မ amphetamine-sensitized ကြွက်များတွင် locomotor sensitization ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးပြောင်းပြန်။ Neurochem ။ Int ။ 60 (4), 344-349 ။ Doi: 10.1016 / j.neuint.2012.01.014
Escobar, AP, Cornejo, FA, Olivares-Costa, M. , González, M. , Fuentealba, JA, Gysling, K. , et al ။ (2015) ။ inhibitory D2 autoreceptor function ကိုမှာ quinpirole- sensitized ကြွက်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine နှင့်အချိုမှု neurotransmission အတွက်လျှော့ချ dopamine ။ ဂျေ Neurochem ။ 134, 1081-1090 ။ Doi: 10.1111 / jnc.13209
Escobar, AP, González, အမတ်, Meza, RC, Noches, V. , Henny, P. , Gysling, K. , et al ။ (2017) ။ ကြွက်များတွင် quinpirole- သွေးဆောင် locomotor sensitization အတွက် dopamine D2 အဲဒီ receptor function ကို၏ kappa opioid အဲဒီ receptor potentiation ၏ယန္တရားများ။ int ။ ဂျေ Neuropsychopharmacol ။ 20, 660-669 ။ Doi: 10.1093 / ijnp / pyx042
Everitt, BJ, Robbins, TW (2005) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက်အားဖြည့်ပေးသည့်အာရုံကြောစနစ်များ - လုပ်ရပ်များမှအလေ့အထများ၊ နတ်။ neuroscience ။ 8, 1481-1489 ။ Doi: 10.1038 / nn1579
Fattore, အယ်လ်, Melis, အမ် (2016) ။ ထကြွလွယ်သောနှင့် compulsive အပြုအမူများတွင်လိင်ကွဲပြားမှု: မူးယစ်ဆေးစွဲအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ စှဲလမျးသူ။ Biol ။ 21 (5), 1043-1051 ။ Doi: 10.1111 / adb.12381
Ferrario, CR, Gorny, G. အ, Crombag, HS, Li, Y. , Kolb, B. , Robinson, TE (2005) ။ ထိန်းချုပ်မှုမှမြင့်တက်နေသောကိုကင်းသုံးစွဲမှုမှကူးပြောင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပလပ်စတစ်။ ဇီဝကမ္မ။ Psy ။ 58 (9), 751-9 ။
Figee, အမ်, Pattij, တီ, Willuhn, ဗြဲ, Luigjes, ဂျေ, et al ဗန်တွင်း Brink, ဒဗလျူ, Goudriaan, အေ။ (2016) ။ obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်စွဲအတွက် compulsivity ။ အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacol ။ 26, 856-868 ။ Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2015.12.003
Ford, CP, Mark, GP, Williams, JT (2006) ။ mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် opioid တားစီးပစ်မှတ်တည်နေရာအရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 26, 2788-2797 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4331-05.2006
Ford, CP, Beckstead, MJ, Williams, JT (2007) ။ somatodendritic dopamine inhibitory postsynaptic ရေစီးကြောင်း၏ Kappa opioid တားစီး။ ဂျေ Neurophysiol ။ 97, 883-891 ။ Doi: 10.1152 / jn.00963.2006
Fuentealba, JA, Gysling, K. , Magendzo, K. , Andrés, ME (2006) ။ ရွေးချယ် kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist U-69593 ကိုထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုကကြွက်ရဲ့နျူကလိယထဲမှာ dopamine extracellular level ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ res ။ 84, 450-459 ။ Doi: 10.1002 / jnr.20890
Fuentealba, JA, Gysling, K. , Andrés, ME (2007) ။ အဆိုပါရွေးချယ် kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist U-69593 ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးကသွေးဆောင် amphetamine မှတိုးမြှင့် locomotor တုံ့ပြန်မှု။ synapses 61, 771-777 ။ Doi: 10.1002 / syn.20424
Gehrke, BJ, Chefer, VI, Shippenberg, TS (2008) ။ ကြွက် dorsal striatum အတွက် dopamine function ကိုအပေါ် salvinorin A ၏စူးရှခြင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှု၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacol ။ (Berl) 197, 509–517. doi: 10.1007/s00213-007-1067-6
Giuliano, C တို့, Belin, D. , Everitt, BJ (2019) ။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည် dorsolateral striatal အပြုအမူအားအပြုအမူအားထိန်းချုပ်ခြင်းကိုပျက်ကွက်ခြင်းမှရလဒ်များရရှိသည်။ ဂျေ Neurosci ။ 39 (9), 1744-1754 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2615-18.2018
Goto, Y. , ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း, AA ကို (2008) ။ နျူကလိယအတွက် Limbic နှင့် cortical သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ accumbens ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 31, 552-558 ။ Doi: 10.1016 / j.tins.2008.08.002
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း, AA ကို, Bunney, BS (1980) ။ Nigral dopamine အာရုံခံ: L-dopa ဆေးထိုးခြင်းနှင့် histofluorescence နှင့်အတူ intracellular မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်။ သိပ္ပံ 210, 654-656 ။ Doi: 10.1126 / science.7433992
Grey, AM, Rawls, SM, Shippenberg, TS, McGinty, JF (1999) ။ အဆိုပါκ-opioid agonist, U-69593, ventral striatum အတွက် dopamine နှင့် glutamate ၏စူးရှသော amphetamine-evoked အပြုအမူများနှင့်ကယ်လစီယမ် - မှီခို dialysate အဆင့်ဆင့်လျော့နည်းစေသည်။ ဂျေ Neurochem ။ 73, 1066-1074 ။ Doi: 10.1046 / j.1471-4159.1999.0731066.x
Graziane, NM, Polter, AM, Briand, LA, Pierce, RC, Kauer, JA (2013) ။ Kappa opioid receptors များသည်စိတ်ဖိစီးမှုများသောကိုကင်းများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ဓာတ်ပြုမှုပလပ်စတစ်ကိုထိန်းညှိပေးသည်။ အာရုံခံဆဲလျ 77, 942-954 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2012.12.034
Heidbreder, CA, Shippenberg, TS (1994) ။ U-69593 သည် Basal accumbens dopamine ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ကိုကင်း sensitization ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ Neuroreport 5, 1797–1800. doi: 10.1097/00001756-199409080-00028
ဟာနန်ဒက်ဇ် -Avila, CA 1. , Rounsaville, BJ, Kranzler, HR (2004) ။ Opioid-, ဆေးခြောက်နှင့်အရက်မှီခိုသောအမျိုးသမီးများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကုသမှုပိုမိုလျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 74 (3), 265-272 ။ Doi: 10.1016 / j.drugalcdep.2004.02.001
ဟော့ဖ်မန်း, AF, Spivak, အီး, Lupica, CR (2016) ။ ကန့်သတ်ပျံ့နှံ့မော်ဒယ်နှင့်အစာရှောင်ခြင်း - စကင်စက်ဘီး voltammetry အားဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့ dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး inhibitors အားဖြင့်တိုးမြှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ACS Chem ။ အာရုံကြော။ 7, 700-709 ။ Doi: 10.1021 / acschemneuro.5b00277
Holden, C. (2001) ။ "အမူအကျင့်" စွဲ: သူတို့တည်ရှိပါသလား သိပ္ပံ 294, 980-982 ။ Doi: 10.1126 / science.294.5544.980
Imperato, အေ, Di Chiara, G. အ (1988) ။ ဦး နှောက်ကျောက်ကပ်ဆေးကြောခြင်းဖြင့်လေ့လာခဲ့သောဒေသတွင်းအသုံးချ D-1 နှင့် D-2 receptor agonists နှင့် antagonists များ၏ဆိုးကျိုးများ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 156, 385–393. doi: 10.1016/0014-2999(88)90284-1
ဂျက်ဆင်, KJ, McLaughlin, JP, ကာရိုး, FI, Damaj, MI (2013) ။ ကြွက်များတွင်နီကိုတင်း - အေးစက်ရာနေရာ preference ကို၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင်ပြန်လည်ထူထောင်အပေါ် kappa opioid အဲဒီ receptor ရန်, norbinaltorphimine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacol ။ (Berl) 226, 763–768. doi: 10.1007/s00213-012-2716-y
Kivell, ခ, Uzelac, Z. , Sundaramurthy, အက်စ်, Rajamanickam, ဂျေ, Ewald, အေ, Chefer, V. , et al ။ (2014) ။ Salvinorin A သည် kappa opioid receptor နှင့် ERK1 / 2- မှီခိုသောယန္တရားများမှတစ်ဆင့် dopamine Transporter function ကိုထိန်းချုပ်သည်။ Neuropharmacology 86, 228-240 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2014.07.016
Koeltzow, TE, Austin, JD, Vezina, P. (2003) ။ quinpirole မှအပြုအမူ sensitization တိုးမြှင့်နျူကလိယ accopens dopamine လျတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်မဟုတ်။ Neuropharmacology 44, 102–110. doi: 10.1016/S0028-3908(02)00328-3
Koob, GF, Volkow, ND (2016) ။ စွဲ၏ Neurobiology: တစ် ဦး neurocircuitry ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု 3, 760–773. doi: 10.1016/S2215-0366(16)00104-8
Koob, GF (2013) ။ စွဲစွဲလမ်းမှုကဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ဦး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 4, 72. Doi: 10.3389 / fpsyt.2013.00072
Labad, ဂျေ 1. , Menchon, JM, Alonso, P. , Segalas, C တို့, Jimenez, အက်စ်, Jaurrieta, N. , et al ။ (2008) ။ obsessive-compulsive လက္ခဏာအတိုင်းအတာအတွက်ကျားကွဲပြားခြားနားမှု။ ပူပန်စိတ်ကျရောဂါ။ 25 (10), 832-838 ။ Doi: 10.1002 / da.20332
Maisonneuve, IM, Archer, အက်စ်, Glick, SD က (1994) ။ U50,488 တစ် kappa opioid အဲဒီ receptor agonist, ကြွက်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine အတွက်ကိုကင်း - သွေးဆောင်တိုး attenuates ။ neuroscience ။ လက်တ။ 181, 57–60. doi: 10.1016/0304-3940(94)90559-2
Mansour, အေ, Fox, CA, Akil, အိပ်ချ်, Watson, SJ (1995) ။ ကြွက် CNS အတွက် Opioid-receptor mRNA စကားရပ်: ခန္ဓာဗေဒနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 18 (1), 22–29. doi: 10.1016/0166-2236(95)93946-U
Mansour, အေ, Burke က, အက်စ်, Pavlic, RJ, Akil, အိပ်ချ်, Watson, SJ (1996) ။ ကြွက် CNS နှင့် pituitary အတွက်ပုံတူမျိုးပွား kappa 1 အဲဒီ receptor ၏ Immunohistochemical မူပြောင်းခြင်း။ neuroscience 71, 671–690. doi: 10.1016/0306-4522(95)00464-5
Margolis, EB, Karkhanis, AN (2019) ။ kappa opioid အဲဒီ receptor ကမကထပြုခဲ့ခြင်းကိုမနှစ်သက်ရန် Dopaminergic ဆယ်လူလာနှင့်တိုက်နယ်ပံ့ပိုးမှုများ။ Neurochem ။ Int ။ 129, 104504. Doi: 10.1016 / j.neuint.2019.104504
Margolis, EB, Hjelmstad, GO, Bonci, အေ, Fields, HL (2003) Kappa-opioid agonists များသည် midbrain dopaminergic neuron များကိုတိုက်ရိုက်တားစီးသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 23, 9981–9986. doi: 10.1523/JNEUROSCI.23-31-09981.2003
Margolis, EB, Hjelmstad, GO, Bonci, အေ, Fields, HL (2005) ။ Kappa နှင့် Mu Opioid Agonists နှစ် ဦး စလုံးသည် Ventral Tegmental Neရိယာရှိ Neurons များသို့ Glutamatergic Input ကိုတားစီးသည်။ ဂျေ Neurophysiol ။ 93, 3086-3093 ။ Doi: 10.1152 / jn.00855.2004
Margolis, EB, Lock, H. , Chefer, VI, Shippenberg, TS, Hjelmstad, GO, Fields, HL (2006) Kappa opioids သည် prefrontal cortex သို့ projecting dopaminergic neuron များကိုထိန်းချုပ်သည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 103, 2938-2942 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0511159103
Margolis, EB, Mitchell, JM, Ishikawa, ဂျေ, Hjelmstad, GO, Fields, HL (2008) ။ Midbrain dopamine အာရုံခံ: စီမံကိန်းပစ်မှတ်အရေးယူအလားအလာကြာချိန်နှင့် dopamine: D (2) အဲဒီ receptor တားစီးဆုံးဖြတ်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 8908-8913 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1526-08.2008
Mathews, IZ, McCormick, CM (2007) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှောင်းပိုင်းမှအမျိုးသမီးနှင့်အထီးကြွက်များသည်အမ်ဖီတမင်းဖြင့်ပြုလုပ်သော locomotor လှုပ်ရှားမှုရှိလူကြီးများနှင့်ကွဲပြားသော်လည်းအမ်ဖီတမင်းအမ်အမ်တမ်ကို မူတည်၍ မရပါ။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 18, 641–650. doi: 10.1097/FBP.0b013e3282effbf5
Mathis, MA 1. , PD, အေ, Funaro, G. အ, RC, တီ, Moraes, ဗြဲ, AR, T. , et al ။ (2011) ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်ကျားကွဲပြားခြားနားမှု: တစ်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ Braz ။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 33 (4), 390-399 ။ Doi: 10.1590 / S1516-44462011000400014
McLaughlin, JP, Marton-Popovici, M. , Chavkin, C. (2003) ။ Kappa opioid receptor antagonism နှင့် prodynorphin ဗီဇပြတ်တောက်မှုကစိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုပိတ်ပင်ထားသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 23 (13), 5674-5683 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.23-13-05674.2003
McLaughlin, JP, Land, BB, Li, S. , Pintar, JE, Chavkin, C (2006a) ။ U50,488 တုပကာ kappa opioid receptors ၏မတိုင်မီကကိုကင်းအပင်စားသုံးမှုကိုအေးစက်စေနိုင်သည့်အတင်းအကျပ်ရေကူးစိတ်ဖိစီးမှုကိုတုပသည်။ Neuropsychopharmacology 31, 787-794 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300860
McLaughlin, JP, Li, အက်စ်, Valdez, ဂျေ, Chavkin, TA, Chavkin, C. (2006b) ။ လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု endogenous kappa opioid စနစ်ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ Neuropsychopharmacology 31 (6), 1241-1248 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300872
Milesi-Hallé, A. , McMillan, DE, Laurenzana, EM, Byrnes-Blake, KA, Owens, SM (2007) ။ လိင်ကွဲပြားမှု (+) - amphetamine- နှင့် (+) - ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်သော Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်မက်သာဖီတမင်းမှဖြစ်ပေါ်စေသောအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 86, 140-149 ။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2006.12.018
Negus, SS, Mello, NK, Portoghese, PS, Lin, CE (1997) ။ rhesus မျောက်များအားဖြင့်ကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပေါ် kappa opioids ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 282, 44-55 ။
Nestler, EJ (2001) ။ စွဲအခြေခံရေရှည် plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2, 119-128 ။ Doi: 10.1038 / 35053570
Perreault, ML, ဂရေဟမ်,,, Bisnaire, L. , Simms, ဂျေ, Hayton, အက်စ်, Szechtman, အိပ်ချ် (2006) ။ အကျူးနှင့် postsynaptic ယန္တရားများ: Kappa-opioid agonist U69593 သည် D2 / D3 agonist quinpirole သို့ locomotor sensitization ကို potentiates Neuropsychopharmacology 31, 1967-1981 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300938
Perreault, ML, Seeman, P. , Szechtman, H. (2007) ။ Kappa-opioid အဲဒီ receptor ဆွက obsessive-compulsive disturb (OCD) ၏ quinpirole sensitization မော်ဒယ်အတွက် compulsive စစ်ဆေးခြင်း၏ pathogenesis ပိုမိုမြန်ဆန်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 121, 976-991 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.121.5.976
ပီယပ်, RC, Kalivas, PW (1997) ။ amphetamine ကဲ့သို့ psychostimulants မှအမူအကျင့် sensitization ၏အသုံးအနှုနျး၏တစ် ဦး က circuitry မော်ဒယ်။ ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 25, 192–216. doi: 10.1016/S0165-0173(97)00021-0
Polter, AM, ဆရာတော်, RA, Briand, LA, Graziane, မင်, ပီယပ်, RC, Kauer, JA (2014) ။ Kappa Opioid Receptors များ၏ Poststress Block သည် Inhibitory Synapses ၏ကာလရှည်အလားအလာကိုကယ်တင်ပေးပြီးကိုကင်းရှာဖွေခြင်းအားပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 76, 785-793 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2014.04.019
Puig-Ramos, အေ, စန်တီယာဂို, GS, Segarra, AC (2008) ။ U-69593, kappa opioid receptor agonist, အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ကိုကင်း - သွေးဆောင်အမူအကျင့် sensitization လျော့နည်းစေသည်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 122, 151-160 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.122.1.151
Robbins, TW, Gillan, CM, Smith, DG၊ de Wit, S. , Ersche, KD (2012) ။ Impulse နှင့် compulsive ၏ Neurocognitive endophenotypes: ရှုထောင်စိတ်ရောဂါကုသမှုဆီသို့ ဦး တည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းသိမြင်မှု။ သိပ္ပံ။ 16, 81-91 ။ Doi: 10.1016 / j.tics.2011.11.009
Roberts သည် DCS၊ Bennett၊ SAL, Vickers, GJ (1989) ။ estrous သံသရာကြွက်များတွင်တိုးတက်သောအချိုးအစားအချိန်ဇယားအပေါ်ကိုကင်း Self- အုပ်ချုပ်မှုအပေါ်သက်ရောက်သည်။ Psychopharmacol ။ (Berl) 98, 408-411 ။ Doi: 10.1007 / BF00451696
ရော်ဘင်ဆင်, TE, Berridge, KC (1993) ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး - sensitization သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 18, 247–291. doi: 10.1016/0165-0173(93)90013-P
ရော်ဘင်ဆင်, TE, Berridge, KC (2001) ။ မက်လုံးပေး - sensitization နှင့်စွဲ။ စှဲမွဲမှု 96, 103-114 ။ Doi: 10.1046 / j.1360-0443.2001.9611038.x
နှင်းဆီ, JH, Karkhanis, AN, Steiniger-Brach, ခ, ဂျုံးစ်, SR (2016) ။ nalmefene ၏ကွဲပြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာနာတာရှည် intermittent ethanol ထိတွေ့မှုအပြီး dopamine စားသုံးမှုနှုန်းနှင့် kappa opioid receptor လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ Int ။ ဂျေ Mol ။ သိပ္ပံ 17, 1216. Doi: 10.3390 / ijms17081216
Schlosburg, JE, Whitfield, TW, Jr. Park, PE, Crawford, EF, ဂျော့ခ်ျ, O. , Vendruscolo, LF, et al ။ (2013) ။ io opioid receptors များ၏ရေရှည်ရန်လိုမှုများသည်ဘိန်းဖြူစားသုံးမှုပိုမိုမြင့်မားလာစေရန်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 33 (49), 19384-19392 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1979-13.2013
Sesack, SR, Pickel, VM က (1992) ။ ကြွက် ventral tegmental inရိယာ၌ enkephalin နှင့် tyrosine hydroxylase immunoreactivity ၏ ultrastructural တည်နေရာ: opiate-dopamine interaction ကများအတွက်မျိုးစုံအလွှာ။ ဂျေ Neurosci ။ 12, 1335–a1350. doi: 10.1523/JNEUROSCI.12-04-01335.1992
Sesack, SR, Aoki, C တို့, Pickel, VM (1994) ။ midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလ်များနှင့်၎င်းတို့၏ striatal ပစ်မှတ်များတွင် D2 receptor ကဲ့သို့သော immunoreactivity ၏ Ultrastructural မူပြောင်းခြင်း။ ဂျေ neuroscience ။ 14, 88–106. doi: 10.1523/JNEUROSCI.14-01-00088.1994
Sesia, တီ, Bizup, ခ, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း, AA ကို (2013) ။ obsessive-compulsive ရောဂါတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏အကဲဖြတ်: phasic dopamine အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဆက်စပ်မှု။ int ။ ဂျေ Neuropsychopharmacol ။ 16, 1295-1307 ။ Doi: 10.1017 / S146114571200154X
Shippenberg, TS, Zapata, အေ, Chefer, VI (2007) ။ Dynorphin နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ pathophysiology ။ Pharmacol ။ Ther ။ 116, 306-321 ။ Doi: 10.1016 / j.pharmthera.2007.06.011
Smith, JA, Loughlin, SE, Leslie, FM ရေ (၁၉၉၂) ။ ကြွက် ventral mesencephalic dissociated ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုကနေ [1992H] dopamine လွှတ်ပေးရန်၏ kappa-Opioid တားစီး။ Mol ။ Pharmacol ။ 42 ။
Smith, JW, Fetsko, LA, Xu, R. , Wang, Y. (2002) ။ Dopamine D2L receptor နောက်ကောက်ကြွက်များသည်မော်ဖင်းအကိုက်၏အပြုသဘောဆောင်သောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းသင်ယူခြင်းတွင်လိုငွေပြမှုကိုပြသသည်။ neuroscience 113 (4), 755–765. doi: 10.1016/S0306-4522(02)00257-9
Smith က JS, Schindler, AG, Martinelli, အီး, Gustin, RM, Bruchas, MR, Chavkin, C. (2012) ။ အဆိုပါ amygdala အတွက် dynorphin / κ-opioid အဲဒီ receptor စနစ်၏စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင် activation နီကိုတင်းအေးစက်ရာအရပျ preference ကို potentiates ။ ဂျေ neuroscience ။ 32, 1488-1495 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2980-11.2012
Spanagel, R. , Herz, အေ, Shippenberg, TS (1992) ။ တက်ကြွစွာတက်ကြွ endogenous opioid စနစ်များကိုဆန့်ကျင် mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်း modulate ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ 89, 2046-2050 ။ Doi: 10.1073 / pnas.89.6.2046
Speciale, SG, Manaye, KF, Sadeq, M. , German, DC (1993) ။ ကြွက်များ၏ midbrain dopaminergic ဒေသများရှိ Opioid receptors ။ ၂ ။ Kappa နှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် receptor ကိုယ်တိုင်ရေးမှတ်တမ်း။ ဂျေအာရုံကြော Transm ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂိုဏ်း။ 91, 53-66 ။ Doi: 10.1007 / BF01244918
Sperling, RE, Gomes, SM, Sypek, EI, Carey, AN, McLaughlin, JP (2010) ။ အီသနော - အေးစက်ရာအရပျ preference ကိုနှင့် Self- အုပ်ချုပ်ရေး၏စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်စွမ်းရည်၏ Endogenous kappa-opioid ဖျန်ဖြေ။ Psychopharmacol ။ (Berl) 210 (2), 199–209. doi: 10.1007/s00213-010-1844-5
Steketee, JD, Kalivas, PW (2011) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးလိုချင်မှု - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအသိစိတ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေနေသည့်အပြုအမူအားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း sibley DR, ed ။ Pharmacol ။ ဗျာ 63, 348-365 ။ Doi: 10.1124 / pr.109.001933
Stuchlik, အေ, Radostová, D. , Hatalova, H. , Vales, K. , Nekovarova, T. , Koprivova, J. , et al ။ (2016) ။ OCD ၏ quinpirole sensitization ကြွက်မော်ဒယ်၏တရားဝင်မှု: တိရိစ္ဆာန်နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားချိတ်ဆက်။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 10, 209. Doi: 10.3389 / fnbeh.2016.00209
Sun က, တီ, သီချင်း, Z. , Tian, ​​Y. , Tian, ​​ဒဗလျူ, Zhu, C တို့, ဂျီ, G. အ, ။ (2019) ။ medial prefrontal cortex သို့ Basolateral amygdala ထည့်သွင်းမှုကအပြုအမူကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုစွဲစွဲလမ်းစေနိုင်သောရောဂါကဲ့သို့ထိန်းချုပ်သည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 116, 3799-3804 ။ Doi: 10.1073 / pnas.1814292116
Svingos, AL, Chavkin, C, Colago, EEO, Pickel, VM (2001) ။ ?? - opioid receptors နှင့် dopamine Transporter များ၏အဓိက coexpression axon profile များကို accumbens ။ synapses 42, 185-192 ။ Doi: 10.1002 / syn.10005
Szechtman, အိပ်ချ်, Talangbayan, အိပ်ချ်, Eilam, D. (1993) ။ အဆိုပါ dopamine agonist quinpirole အားဖြင့်သွေးဆောင် sensitization ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အမူအကျင့်အစိတ်အပိုင်းများ။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 4, 405–410. doi: 10.1097/00008877-199308000-00014
Szechtman, အိပ်ချ်, Talangbayan, အိပ်ချ်, Canaran, G. အ, Dai, အိပ်ချ်, Eilam, D. (1994) ။ အဆိုပါ dopamine agonist quinpirole နှင့်အဆိုပြုထားဗဟိုစွမ်းအင်ကိုထိန်းချုပ်ယန္တရားများကသွေးဆောင်အမူအကျင့် sensitization ၏ Dynamics ကို။ Psychopharmacol ။ (Berl) 115, 95-104 ။ Doi: 10.1007 / BF02244757
Szechtman, အိပ်ချ်, Sulis, ဒဗလျူ, Eilam, D. (1998) ။ Quinpirole သည်ကြွက်များတွင်စစ်ဆေးခြင်းအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ obsessive-compulsive disorder (OCD) ဖြစ်နိုင်သည့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်လ်။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 112, 1475-1485 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.112.6.1475
Szechtman, အိပ်ချ်, Culver, K. , Eilam, D. (1999) ။ စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး - compulsive ရောဂါ (OCD) တွင် dopamine စနစ်များ၏အခန်းကဏ္:: ဝတ္ထု psychostimulant- သွေးဆောင်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ကနေဂယက်ရိုက်။ Pol ။ ဂျေ Pharmacol ။ 51, 55-61 ။
Szechtman, H. , Eckert, MJ, Tse, WS, Boersma, JT, Bonura, C a, JZ, M. , et al ။ (2001) ။ Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ် quinpirole-sensitized ကြွက်များ၏ compulsive စစ်ဆေးနေ: ပုံစံနှင့်ထိန်းချုပ်မှု။ BMC neuroscience ။ 2, 4. doi: 10.1186/1471-2202-2-4
Szechtman, H. , Ahmari, SE, Beninger, RJ, Eilam, D. , Harvey, BH, Edemann-Callesen, H. , et al ။ (2017) ။ obsessive-compulsive ရောဂါ: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှထိုးထွင်းသိမြင်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 76, 254-279 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2016.04.019
Tejeda, HA, Bonci, အေ (2019) ။ dopamine ဒိုင်းနမစ်၏ Dynorphin / kappa-opioid အဲဒီ receptor control: အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်စေသောပြည်နယ်များနှင့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1713, 91-101 ။ Doi: 10.1016 / j.brainres.2018.09.023
Tejeda, HA, ဝူ, ဂျေ, Kornspun, AR, Pignatelli, အမ်, Kashtelyan, V. , Krashes, အမ်ဂျေ, et al ။ (2017) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု - တားစီးချိန်ခွင်လျှာ၏ Pathway- နှင့်ဆဲလ် - တိကျတဲ့ kappa-opioid အဲဒီ receptor မော်ဂျူ differential ဂိတ်စ်နှင့် d1 အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု accumbens ။ အာရုံခံဆဲလျ 93 (1), 147-163 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2016.12.005
Thompson က, AC, Zapata, အေ, တရားမျှတမှု, JB, Vaughan, RA, Sharpe, LG, Shippenberg, TS (2000) ။ Kappa-opioid receptor activation သည်နျူကလိယတွင် dopamine စားသုံးမှုကိုပြုပြင်သည်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုကိုဆန့်ကျင်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 20, 9333–9340. doi: 10.1523/JNEUROSCI.20-24-09333.2000
Thompson က, D. , Martini, အယ်လ်, Whistler, JL (2010) ။ mouse striatum ရှိ D1 နှင့် D2 dopamine receptors ၏ပြောင်းလဲမှုအချိုးအစားသည်ကိုကင်းအားအပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံခံမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ PloS One ကို 5, e11038 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0011038
Usiello, A. , Baik, J.-H. , Rougé-Pont, F. , Picetti, R. , Dierich, အေ, LeMeur, M. (2000) ။ dopamine D2 receptors နှစ်ခု isoforms ၏ကွဲပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ သဘာဝ 408, 199-203 ။ Doi: 10.1038 / 35041572
ဗန် Bockstaele, EJ, Pickel, VM (1995) ။ ကြွက် ဦး နှောက်ထဲမှာနျူကလိယမှနျူကလိယမှ ventral tegmental areaရိယာစီမံကိန်းတွင် GABA ပါဝင်သောအာရုံခံ။ ဦးနှောက် Res ။ 682 (1-2), 215–221. doi: 10.1016/0006-8993(95)00334-M
Van't Veer, အေ, Bechtholt, AJ, Onvani, S. , Potter, D. , Wang, Y. , Liu-Chen, LY, et al ။ (2013) ။ ဦး နှောက် dopamine အာရုံခံကနေ kappa-opioid receptors ၏ ablation anxiolytic ကဲ့သို့သက်ရောက်မှုရှိပြီးကိုကင်း - သွေးဆောင်ပလပ်စတစ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 38 (8), 1585-1597 ။ Doi: 10.1038 / npp.2013.58
Vanderschuren, LJ, Kalivas, PW (2000) ။ အပြုအမူဆိုင်ရာ sensitization ၏ induction နှင့်စကားရပ်အတွက် dopaminergic နှင့် glutamatergic ဂီယာအတွက်ပြုပြင်: preclinical လေ့လာမှုများတစ်ဝေဖန်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychopharmacol ။ (Berl) 151 (2-3), 99-120 ။ Doi: 10.1007 / s002130000493
Volkow, ND, ပညာရှိ, RA, Baler, R. (2017) ။ အဆိုပါ dopamine ရည်ရွယ်ချက်ကစနစ်: မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အစားအစာစွဲဘို့ဂယက်ရိုက်။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 18, 741-752 ။ Doi: 10.1038 / nrn.2017.130
Walker, QD, ရွန်နီ, MB, Wightman, RM, Kuhn, CM (2000) ။ အစာရှောင်ခြင်းသိသိ voltammetry ဖြင့်တိုင်းတာသည်အဖြစ်ယောက်ျားကြွက် striatum ထက် dopamine ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်စားသုံးခြင်းသည်အမျိုးသမီး၌သာလွန်သည်။ neuroscience 95, 1061–1070. doi: 10.1016/S0306-4522(99)00500-X
Wee, အက်စ်, Koob, GF (2010) ။ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုအတွက် dynorphin-opioid စနစ်၏အခန်းကဏ္။ ။ Psychopharmacol ။ (Berl) 210, 121–135. doi: 10.1007/s00213-010-1825-8
Wee, အက်စ်, Orio, အယ်လ်, Ghirmai, အက်စ်, Cashman, JR, Koob, GF (2009) ။ kappa opioid receptors များကိုတားမြစ်ခြင်းသည်ကိုကင်းအားတိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်သောကြွက်များတွင်ကိုကာကိုလာများပြားလာခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ Psychopharmacol ။ (Berl) 205, 565–575. doi: 10.1007/s00213-009-1563-y
Whitfield, TW, ဂျူနီယာ, Schlosburg, je, Wee, အက်စ်, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, အေ, ဂျော့ခ်ျ, O. , Grant က, Y. , et al ။ (2015) ။ the နျူကလိယအတွင်းရှိ Opioid receptors များသည် shell အနေဖြင့် methamphetamine စားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 35 (10), 4296-4305 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1978-13.2015
Williams, MT, Mugno, ခ, Franklin, အမ်, Faber, အက်စ် (2013) ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်ရောဂါလက္ခဏာများအတိုင်းအတာ: ထိတွေ့မှုနှင့်ရိုးရာဓလေ့ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်အတူဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့်ကုသမှုရလဒ်များ။ Psychopathology 46, 365-376 ။ Doi: 10.1159 / 000348582
Wilson က, CJ, လူငယ်, SJ, Groves, pm တွင် (1977) ။ ဆဲလ်အမျိုးအစားများနှင့် ၄ င်းတို့၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 136, 243–260. doi: 10.1016/0006-8993(77)90801-0
ပညာရှိ, RA (2009) ။ ဆုချခြင်းနှင့်စွဲခြင်းအတွက် nigrostriatal - mesocorticolimbic သာမက dopamine အတွက်အခန်းကဏ္oles။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 32, 517-524 ။ Doi: 10.1016 / j.tins.2009.06.004
Xiao, အယ်လ်, Becker က, JB (1994) ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကြွက်များတွင် extracellular striatal dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု၏အရေအတွက် microdialysis ပြဌာန်းခွင့်: estrous သံသရာနှင့် gonadectomy ၏ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ လက်တ။ 180, 155–158. doi: 10.1016/0304-3940(94)90510-X
Yager, LM, Garcia, AF, Wunsch, AM, Ferguson, SM (2015) ။ အဆိုပါ striatum ၏အတွင်းနှင့်အပြင်: မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်အခန်းကဏ္။ ။ neuroscience 301, 529-541 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2015.06.033
သော့ချက်စာလုံးများ: kappa opioid receptor, dopamine, compulsivity, amphetamine, quinpirole, locomotor sensitization
ကိုးကားဖော်ပြချက် - Escobar AdP, Casanova JP, Andrés ME နှင့် Fuentealba JA (2020) Kulsa Opioid နှင့် Dopamine Systems အကြားမလိုက်နာသောအပြုအမူများအကြား Crosstalk တပ်ဦး။ Pharmacol ။ 11: 57 ။ Doi: 10.3389 / fphar.2020.00057
လက်ခံရရှိ: 16 အောက်တိုဘာလ 2019; လက်ခံခဲ့သည် - ၂၂ ရက်၊
Published: 18 ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 ။
Gonzalo အီး Yevenes, Concepcion, ချီလီတက္ကသိုလ်
Luis Gerardo Aguayo, Concepcion, ချီလီတက္ကသိုလ်
Hugo Tejeda, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု (NIDA)၊ အမေရိကန်
စီစီလီယာ Scorza, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), ဥရုဂွေး
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Escobar, Casanova, Andrésနှင့် Fuentealba ။ ၎င်းသည်စည်းကမ်းချက်များအရဖြန့်ဝေထားသည့်ပွင့်လင်းမြင်သာသည့်ဆောင်းပါးဖြစ်သည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင် (CC ကို BY)။ အသုံးပြုခြင်း, အခြားဖိုရမ်များအတွက်ဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်မျိုးပွားခွင့်ပြု၏, မူရင်းစာရေးဆရာ (s) နှင့်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင် (s) ကိုထောက်ပံ့ပေးအသိအမှတ်ပြုကြသည်နှင့်ဤဂျာနယ်အတွက်မူရင်းထုတ်ဝေကိုးကားကြောင်း, လက်ခံပညာသင်နှစ်အလေ့အကျင့်များနှင့်အညီ။ အဘယ်သူမျှမသုံးစွဲခြင်း, ဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်မျိုးပွားဤဝေါဟာရများနှင့်အတူလိုက်လျောမခွင့်ပြုထားပါသည်။
* စာပေးစာယူ - José Antonio Fuentealba [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
†ORCID: ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Fuentealba, orcid.org/0000-0003-0775-0675